သူကြီးမင်း (တုံးဖလား): 2011
နှိုးဆော်စာနှင့် နားနားပြီး ပြူး
ပို့စ်ကို မဖတ်ခင် ဒီနေရာလေးကို သွားပြီး မင်္ဂလာတောင်ညွန့် မီးဘေးအတွက် မိမိတို့ နိုင်သလောက် သွားရောက် လှူဒါန်းလိုက်ကြပါဦး။ သူကြီးမင်းလဲ တတ်နိုင်သလောက် ပါဝင်ထည့်လှူမယ်။ ပျော်ပျော်ပါးပါး လှူကြတန်းကြတာပေါ့။ ။
အပြင်ထွက်မယ်ကြံလိုက် မိုးကအေးလိုက်၊ မိုးကအေးလိုက် အိမ်ထဲကွေးနေလိုက်နဲ့ မိုး-အေး-ကွေး သံသရာလည်နေလေရဲ့။ အမိမြေအတွက် ဆိုင်ကလုန်း စိုးရိမ်လို့ကောင်းနေတုန်း ဆိုင်ကလုန်းမလာဘဲ မီးတွေတဟုန်းဟုန်း ထတောက်လောင်နေတာ မြင်ရတော့ ဘောလုံးစကားနဲ့ ပြောရရင် ဘယ်ခြေအယောင်ပြပြီး ညာခြေနဲ့ အားရပါးရ ကြုံးကန်လေရော့သလား အောက်မေ့ရတယ်။ မင်္ဂလာတောင်ညွန့် ကူးတို့ဆိပ်သိုလှောင်ရုံ ပေါက်ကွဲမီးလောင်မှုပြီးတော့ ကမာရွတ်မြို့နယ် အမှတ် (၂) အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းတဲ့။ မီးကတော့ ရက်စက်လို့ကောင်းတုန်း။
စိတ်တွေ ညီးညူနေပြီး ခရစ်စမတ်အလွန် နယူးယီးယားအနီး ရှုခင်းရှုကွက်ကလေးတွေ အပြင်သွား ခံစားချေရမလား စိတ်ကူးလိုက်ပြန်တော့လဲ ဘိလပ်ရွှေပြည်ကြီးမှာ လေကမြူး မိုးကပြုး လူတွေကရူးနဲ့ သူကြီးမင်းတောင် မူးချင်လာသလိုလို ဖြစ်လာပါရောလား။ ဒါနဲ့ မဖြစ်သေးပါဘူး။ အများတကာ ဓါတ်ပုံတွေ လွှတ်တင်နေကြသလို သူကြီးမင်းလဲ ရှိစုမဲ့စု ဓါတ်ပုံလေးတွေ တင်ရကောင်းမယ်ဆိုပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်လောက်က မြေလျောက်ပြီး ခြေသရမ်းခဲ့တာလေးတွေကို စုဆောင်း စုပေါင်းပြီး အခုလို တင်ပြဖြစ်လိုက်ပါတော့တယ်။ အန်တီတင့်ကတော့ ဘုရားတွေကို နားနားပြီး ဖူး ဆိုပြီးတင်ခဲ့သလို ကန်ဒီလေးကလဲ အရက်တွေကို နားနားပြီး မူးတဲ့။ ဒါကြောင့် သူကြီးမင်းရိုက်ချက်တွေကိုလဲ နားနားပြီးသာ ပြူးကြပေတော့လို့။ ။
ဒါကတော့ ဘိလပ်မှာ တစ်ရက်တစ်ရက် လူပေါင်း သိန်းချီပြီး ဖြတ်သန်းသွားလာလေ့ရှိကြတဲ့ နာမည်ကြီး လန်ဒန်မြို့ အောက်စ်ဖို့ဒ် စထရိပါဘဲ။ ခရစ်စမတ် မတိုင်ခင်ကထဲက မီးအလှဆင်ထားကြတာ။
ဒါကတော့ အောက်စဖို့ဒ်စထရိကို ကန့်လန့်ဖြတ်ထားတဲ့ ရီဂျင့်စထရိပါ။ သူလဲ လှတာပါဘဲ။
တစ်ယောက်ထဲ ရီဂျင့်စထရိအတိုင်း လမ်းလျှောက်လာလိုက်တာ ပစ်ကာဒလီမြေအောက်ဘူတာရုံနားရောက်လာတယ်။ အဲဒီမှာ စကရင် အကြီးကြီးရှိတယ်။ ကြီးဆို အိမ်တစ်လုံးစာမက ကြီးတာ။
နိုင်ငံတိုင်းမှာ မရှိမဖြစ်တဲ့ တရုတ်တန်းလေ။ အာရှအစားအစာတွေ အများကြီး ရနိုင်တယ်။ မြန်မာအစားအစာတောင် ရသေး။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံခြားဖြစ် မြန်မာအစားအစာပေါ့။
တရုတ်တန်းက ဖြတ်တက်လာတော့ နာမည်ကြီး ထရဖာဂါစကွဲယားကို ရောက်လာတယ်။ နိုင်ငံအပေါ် မကြိုက်တာရှိလို့ အော်ဟစ်ချင်ရင် ဒီကိုလာလာပြီး အော်ကြလေ့ရှိတယ်။ နိုင်ငံပေါင်းစုံကလူတွေ လာလာအော်ကြတဲ့နေရာပေါ့။ အဲဒီအနားမှာ နေရှင်နယ်ဂယ်လာရီရှိတယ်။ သွားတိုင်း ဂယ်လာရီအထဲကို ၀င်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ ဓါတ်ပုံတွေ ပန်းချီကားတွေ စိတ်ဝင်စားတာထက် အခမဲ့ ရှူးရှူးပေါက်ရလို့ ၀င်ဖြစ်တာက များတယ်။း)
အဲဒီ စကွဲယားမှာ နှစ်စဉ် ခရစ်စမတ်သစ်ပင်စိုက်တယ်။ ခရစ်စမတ်သီချင်းတွေ ဆိုကြတယ်။ ပျော်စရာကြီး။
ထရဖာဂါစကွဲယားကနေ နာမည်ကြီး ဘစ်ဘင်၊ ပါလီမန်၊ ၀က်စ်မင်စတာအပ်ဘေး၊ လန်ဒန်အိုင်းတို့ စုပေါင်းတည်ရှိနေတဲ့ ၀က်စ်မင်စတာကို ဖြတ်လျောက်တော့ လမ်းမှာ ဒီရုပ်ပုံကို တွေ့တယ်။ ဘာရယ်လို့တော့ မဟုတ်ဘူး။ ရိုက်ချင်စိတ်ရှိတာနဲ့ ရိုက်လာတာ။
ရောက်လာပါပြီ။ နာမည်ကြီး ဘစ်ဘင်ကြီး။ အဲဒီဘစ်ဘင်ကြီးက ပါလီမန်အဆောက်အအုံနဲ့ တွဲလျှက်။ နှစ်သစ်ကူးမှာ ဒီဘစ်ဘင်ကြီးကို ၀ိုင်းကြည့်ပြီး ကောင့်ဒေါင်း လုပ်ကြလေ့ရှိတယ်လေ။ ဘစ်ဘင်ကြီးလဲ ည ၁၂ ချက် ဒေါင် ကနဲ မြည်ရော။ မီးရှူးမီးပန်းတွေဆို လှမှလှ။ မယုံရင် ဒီမှာ ကြည့်ကြည့်။ လူတွေ သိန်းချီပြီး ညဘက် အဲဒီအနား သွားစောင့်ကြတယ်လေ။ အနီးကပ်ကြည့်ချင်ကြလို့တဲ့။ အလှဆုံးကတော့ လန်ဒန်အိုင်းပါဘဲ။ နှစ်သစ်ကူးညမှာ ပန်းပွင့်ကြီးကျနေတော့တာဘဲ။ ဘစ်ဘင်နဲ့ လန်ဒန်အိုင်းနဲ့က သိန်းမြစ် ဟိုဘက်ကမ်း ဒီဘက်ကမ်းလေ။ နီးနီးလေး။ တံတားဖြတ်လျှောက်လိုက်ရုံလေး။
ဘစ်ဘင်နဲ့ ပါလီမန်အဆောက်အအုံကို ဟိုးးးတုန်းက ရိုက်ထားတဲ့ နေ့ခင်းပုံလေးတွေပါ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဘစ်ဘင်ကနေ ၃ မိနစ်လောက် လမ်းလျှောက်သွားလိုက်တော့ မင်းသားဝီလျံနဲ့မင်းသမီးကိတ် လက်ထပ်ခဲ့တဲ့ ၀က်စ်မင်စတာ အပ်ဘေးကို ရောက်တယ်။ ညဘက်ဆိုတော့ ဘာမှ မလှဘူး။ ဒါကြောင့် ဟိုအရင်က ရိုက်ထားတဲ့ နေ့ဘက်ပုံတွေပါ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
လန်ဒန်အိုင်းတဲ့။ လန်ဒန်မျက်စိပေါ့။ တစ်လုံးထဲ ရှိတယ်။ သိန်းမြစ်ကမ်းစပ်မှာ တည်ဆောက်ထားတယ်။ အဲဒါကြီး စီးပြီး လန်ဒန်မြို့ကို အပေါ်စီးက ကြည့်ရတာ အရသာရှိတယ်။ တစ်ခေါက်တော့ စီးဖူးတယ်။ ကိုယ်စီးတဲ့အခါမှ ဒါကြီး သိန်းမြစ်ထဲ ပြုတ်ကျသွားရင်ဒုက္ခဆိုပြီး တွေးမိခဲ့သေးတယ်။
နေ့ဘက် ပုံလေးတွေပါ ကြည့်ကြဦးပေါ့။
ဒါကတော့ ဘိလပ်ရဲ့ နာမည်ကြီး သိန်းမြစ်ပေါ့။ မြစ်ကလေးက သိပ်တော့ မကြီးပါဘူး။ ဘိလပ်သားတွေ ဖွလိုက်တော့ သိန်းမြစ်က ကမ္ဘာကျော်သွားရော။ လန်ဒန်မြို့ထဲ ဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေတယ်။ ဟို ရှေးရှေးတုန်းက ဘိလပ်သားတွေ ဒီမြစ်ကိုဘဲ အားကိုးပြီး စီးပွါးရှာခဲ့ကြတာလေ။ ဒါကြောင့် ဒီမြစ်ကတစ်ဆင့် ဘိလပ်နိုင်ငံထဲရှိတဲ့ မြို့တော်တော်များများကို သွားလို့ရတယ်။ ဘိလပ်မှာ တူးမြောင်းတွေက များမှများ။
မြစ်ကလေးကို ကြည့်ပြီး သနားနေမိတယ်။ မြန်မာက ငမိုးရိပ်ချောင်းလို လွတ်လွတ်လပ်လပ် မနေရရှာဘူး။ ဖြစ်သလို ညစ်ပေပေလဲ နေခွင့်မရရှာဘူး။ ဘေးရန်တွေကလဲ များမှများ။ များဆို မြစ်အောက် လိုဏ်ဖောက်တယ်။ မြစ်ကမ်းတစ်လျှောက် ကွန်ဂရက်ကာတယ်။ မြစ်ပေါ် တံတားပေါင်းများစွာ ဆောက်တယ်။ လူတွေလဲ မြစ်ကို စားကြွင်းစားကျန် မကျွေးကြဘူး။ မြစ်ထဲမှာလဲ အလှစီးသင်္ဘောတွေ အများကြီးလာထားကြတယ်။ သနားစရာ။း)
ကဲ.. ပြူးကြည့်ပြီး မူးသွားကြပြီလား။ အန်တီတင့်ရဲ့ ဘုရားဖူးရသလောက်တော့ ကုသိုလ်မရဘူးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ သူကြီးမင်းရဲ့ရိုက်ချက်ကို ပြုးကြည့်ရတာ မရူးရလောက်ဘူးတော့ ထင်ပါရဲ့။ နှစ်သစ်မှာ အားလုံး မိမိနှစ်သက်ရာ ဖူးနိုင် မူးနိုင် ပြူးနိုင် ရူးနိုင် မြူးနိုင် ထူးနိုင်ကြပါစေ။ (သူကြီးမင်း)။ ။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 15:42 15 comments:
Breaking news( ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း)
လူတွေ နေ့စဉ် သေလိုက်ကြတာ တစ်ဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့။ အငတ်ဘေးကြောင့်လဲသေကြ၊ အချစ်ဘေးကြောင့်လဲ သေကြ၊ စစ်ဘေးကြောင့်လဲ သေကြ၊ ရောဂါဘေးကြောင့်လဲ သေကြနဲ့ သေပုံသေနည်း အမျိုးမျိုးနဲ့ သေလိုက်ကြတာ။ လောကကြီးမှာ နေရထိုင်ရတာတောင် ကျဉ်းကြပ်လာသလိုပါဘဲလား။
ဒီကြားထဲ လာပြန်ပြီ။ သဘာဝဘေးတဲ့။ ဒီသဘာဝဘေးဒဏ်တွေ နှိပ်စက်လို့ လူတွေ သေလာလိုက်ကြတာ တစ်နှစ် တစ်နှစ် နဲနဲနှောနှောမဟုတ်။ တစ်ပုံတစ်ပင်ကြီး။ တကယ့်ကို တစ်ပုံတစ်ပင်ကြီး။ သံဝေဂရစရာ အလွန်ကောင်းတဲ့ လောကကြီးပါဘဲ။ မွေး ကြီး အို နာ သေ နိယာမ ဖြစ်စဉ်ကြီးက ဘေးရန် ဘေးဒဏ် အမျိုးမျိုးကြောင့် အစီအစဉ်တွေ ခုန်ကျော် ဖြစ်ပျက်နေကြလေရဲ့။
မြတ်စွာဘုရား ဟောထားတာရှိတယ်။ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ် မင်းလုပ်တဲ့သူတွေ၊ ရဟန်းပုဏ္ဏားတွေ၊ တိုင်းသူပြည်သားတွေ တရားမစောင့်တော့တဲ့အခါကျရင် ကြယ် လ နေ နက္ခတ်တွေရဲ့ လည်ပတ်မှုတွေဟာလဲ မမှန်မကန် ဖြစ်လာမယ်တဲ့။ အဲဒီ လည်ပတ်မှု မမှန်ကန်တော့တဲ့အခါရောက်ရင် ရာသီဥတုတွေ ဖောက်ပြန်လာမယ်၊ သဘာဝဘေးရန်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာမယ် ( မြေပြိုမယ်။ ရေကြီးမယ်။ မီးလောင်မယ်။ မီးတောင်တွေ ပေါက်ကွဲမယ်။ ငလျင်လှုပ်မယ်။ မုန်တိုင်းတိုက်မယ်။ ဂြိုဟ်တွေ ၀င်ဆောင့်မယ်)။ အဲဒီလိုနဲ့ လူတွေ သက်ရှိသတ္တ၀ါတွေ သေကြေပျက်စီးကြမယ်တဲ့။ မှန်လိုက်တာ။
ဘယ်လိုဘဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ။ လူဆိုတာ အသိဥာဏ်ရှိတဲ့ သတ္တ၀ါ တစ်မျိုးမဟုတ်လား။ သဘာဝဘေးဒဏ်ကို အသိဥာဏ်လေးနဲ့ ကာကွယ်ကြရမှာပေါ့။ အသိဥာဏ်ကို ရှေးရှုပြီး ကြိုတင်အကာအကွယ်ယူထားနိုင်ကြရင် ပျက်စီးသင့်သလောက် မပျက်စီးတော့ဘူးပေါ့။ ယနေ့လို သိပ္ပံခေတ်ကြီးမှာ သတင်းမေဒီယာ ပျံ့နှံ့လွယ်မှုက လူတွေအတွက် ကာကွယ်မှု တစ်ခု ဖြစ်စေပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ ဒီလို ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဒီသတင်းကို လူအများ သိရအောင် ဘလော့ဂါကိုရင်ဆီကနေ တစ်ဆင့်ရယူပြီး ကျနော့်ဘလော့ပေါ် တင်လိုက်ခြင်းဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ဘလော့ဂါများ၊ တွစ်တာပိုင်ရှင်များ၊ ဖေ့ဘုတ်စ်ပိုင်ရှင်များလဲ ပြန်လည် မျှဝေပေးစေချင်ပါတယ်။ သဘာဝဘေးဒဏ်ကို ကိုယ်တိုင်သွားရောက် မထိန်းချုပ်နိုင်ပေမဲ့ ဘေးဒဏ်ကျရောက်မဲ့ နေရာက လူတွေ ကြိုတင် သိထားနိုင်ရင်တော့ အကျိုးအများကြီး ဖြစ်ထွန်းမှာ သေချာပါတယ်။ (ကိုကိုမောင်၊ ပန်းရနံ့)
27.12.2011 နေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၈ နာရီအချိန်) မြင်တွေ့ရတဲ့ မိုးလေ၀သ ကောင်းကင်ဓါတ်ပုံ (Google Earth)
ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် အနောက်တောင် ပိုင်းမှာ ဖြစ်ပေါ် နေတဲ့ 03B မုန်တိုင်းဟာ အားကောင်းတဲ့ ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်းကြီး ဖြစ်လာပြီး (၃၀-၁၂-၂၀၁၁) ရက် ညနေပိုင်းမှာ အိန္ဒိယ နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း အရှေ့ဖက် ကမ်းခြေကို Chennai မြို့အနီးမှ ဖြတ်ကျော်ကာ ကုန်းတွင်းကို ၀င်ရောက် လိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းရ ပါတယ်။ (၂၇-၁၂-၂၀၁၁ ရန်ကုန်၊ နံနက် ၀၆း၂၈ နာရီ)
03B မုန်တိုင်းကို တဖြည်းဖြည်း ပိုမိုအားကောင်းလာကာ အားကောင်းတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြီး တစ်ခုဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက် (၃၀-၁၂-၂၀၁၁) နေ့ညနေပိုင်းအချိန်မှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ပိုင်း အရှေ့ဖက်ကမ်းခြေကို Chennai မြို့အနီးက ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
အနေအထားကတော့ အန္တရာယ်အလွန်ကြီးမားတဲ့ အခြေအနေပါပဲ။ ဒီလိုအင်အားနဲ့သာဖြတ်ခဲ့ရင်သေချာပေါက် မုန်တိုင်းဒီရေက တက်တော့မှာပဲ။ အသေအပျောက်တွေကိုလည်း စိတ်မချမ်းမြေ့စရာ ကြားရတော့မှာပါပဲ။
ဒီနေရာမှာ တကယ်ဆိုရင် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုပဲလိုပါတယ်.။ အချိန်(၃)ရက်အနည်းဆုံးရပါတယ်။ အိန္ဒိယပြည်သူတွေ ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ကြပါစေ။ ကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့ ဒီမုန်တိုင်းနောက်(၃)ရက်အတွင်း လမ်းကြောင်းပြောင်းကာ အရှေ့မြောက်ဖက်ကိုပြန်ကွေ့မလာပါစေနဲ့။
ဒါကိုတော့ သတိထားပြီးစောင့်ကြည့်နေဖို့လိုပါတယ်။ လို့ ဒေါက်တာ ဦးထွန်းလွင် က TunLwin.com မှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။..
Credit : :http://tunlwin.com/
မဒမ်ကိုးဘလော့မှ (ကိုရင်အသိပေးမှုဖြင့်) ယူသုံးပြီး ပြန်လည်မျှဝေသည်။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 02:02 18 comments:
ဒါဇင်ဘီ ခရတ်စမစ် တို့ပက်စ်
"နိုး--နိုး--နှင်းကို ကြိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ နှင်းကို ကြောက်တယ်--ဘယ်မှ မသွားဘဲ တစ်ယောက်ထဲ အေးအေးဆေးဆေး နေချင်တယ်။--နတ်သင်း--မရှိပါ--နိုးဘော်ဒီ--မလုပ်ပါ။ မရှိပါ။--နိုး-- နတ်သင်း--နိုး--နိုး--"
တစ်မျိုး မထင်လိုက်ပါနဲ့။ သမီးငယ်လေးတွေ ကျွေးတဲ့ တက်စာ စားမိနေလို့ အစဉ်အတိုင်း ဖြေဆေးရှာနေတာပါ။ ဘဘမှာ အသက်ကလဲကြီး သားထောက်သမီးခံကလဲ မရှိဆိုတော့ ဒီလိုဘဲ တစ်ခါတစ်ခါ ဒါမနူးသမီးငယ်လေးတွေ ချချ ကျွေးလေ့ရှိတဲ့ တက်စာတွေကို စားနေကျပါ။ စားမိတိုင်းလဲ ကွေးနေအောင် တက်တာကလား။ တက်တိုင်းလဲ ဒီလိုဘဲ ဖြေဆေးစားနေကျဆိုတော့ ကျွေးလိုက် စားလိုက် တက်လိုက် ဖြေလိုက်နဲ့ တဂ်သံသရာ လည်နေလေတော့ရဲ့။
ဘဘတို့က တောကြီးမျက်မဲထဲက ပေါက်ဖွားလာတဲ့ တောသားစစ်စစ်တွေဆိုတော့ ဗဟုသုတနည်းချက်ကတော့ မပြောပါနဲ့တော့။ ခရစ်စမတ်ဆိုတာလဲ မကြားဖူး၊ အစ်နေ့ဆိုတာလဲ မသိ၊ ဒီပါဝလီဆို ဝေလားဝေးထဲကဘဲ။ မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့အလျောက် အဖိတ်နေ့တို့ ဥပုသ်နေ့တို့လောက်သာ သိတာကလား။ ဗုဒ္ဓနေ့တို့ ဓမ္မစကြာနေ့တို့ အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့တို့ ဆိုတာကိုတောင် ဘာကို ဘာ့ကြောင့် ဘာနေ့လို့ ခေါ်နေကြမှန်း သိကြတာ မဟုတ်ဘူး။
အဖိတ်နေ့ဆိုတာ ကြားလိုက်ရရင် ရေနွေးကြမ်းခွက်ထဲက ရေနွေးကြမ်းတွေ ဖိတ်စင် လွှင့်ကျ နေတာကို မြင်ယောင်နေမိတယ်။ ပြီးတော့ ဥပုသ်နေ့လို့ ပြောသံကြားရတဲ့အခါ တ ဘူ ဘူ အီနေတဲ့ ဘုတ်အီသံကိုဘဲ ကြားယောင်နေမိပြန်ရော။ ထို့အတူပါဘဲ စန်တာကလော့ ဆိုတဲ့ အသံကြားရရင် မန်းမြေကို ဘုရားဖူးသွားရင်း မြင်ခဲ့ရတဲ့ ဈေးချိုက နာရီစင်ကြီးကိုဘဲ ပြေးမြင်ယောင် နေမိလေရဲ့။ စန်တာကလော့ ကို Centre Clock လို့ဘဲ နားလည်လိုက်တာကိုး။ မိန်းနာရီစင်ကြီးလို့ ဘာသာပြန်မိရောပေါ့။ နောက်တစ်ခု ဒီပါဝလီတဲ့။ အဲဒီအသံကြားရင်လဲ ရွာအရှေ့ပိုင်းက ဦးဒီပကြီးကို ပြောင်းဖူးဖက် ဆေးလိပ်ကြီး သောက်နေတဲ့ပုံ မြင်ယောင်မိပြန်ရော။ အစ်နေ့ကို ပိုဆိုးသေး။ လည်ပင်းတောင် ယားကျိကျိ ဖြစ်နေခဲ့တာ။ လည်ပင်းကို လာအစ်နေသလား မှတ်နေလို့လေ။ ဂလို ဂလို အသိပညာ အတတ်ပညာ ကြွယ်ဝတဲ့ တောသားစစ်စစ် ဘဘတို့ဘ၀ကို ဘယ်သူ ဘယ်ဝါ ဘယ်နတ် ဘယ်သိကြားက ကိုယ်ချင်းစာမိပါ့မလဲလေ။
တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ရှိတဲ့ လူတွေကို ဘဘတို့ တုံးဖလားရွာသားတွေလိုဘဲလို့ ထင်ထားခဲ့ကြတာ။ ထင်ထားဆို အခုထက်ထိ အဲဒီလို ထင်နေကြတုန်းလေ။ ဟိုသင်္ကြန်ကာလတုန်းက တစ်ရွာလုံးမှ တစ်လုံးထဲရှိတဲ့ ရွာဦးကျောင်းက တယ်လီဖုန်းလေးနဲ့ မကြားတကြား စကားပြောဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဘဘအသံကို ကြားဖူးချင်တော့ တစ်ရွာလုံးနီးနီး တစ်ယောက်တစ်လှည့်စီ စကားပြောကြပါရောလား။ ပြီးတော့ မေးခွန်းတွေက များလှပါဘိသနဲ့။ ရေပက်ခံ ထွက်မလည်ဘူးလား။ သင်္ကြန်ကပွဲတွေ သွားမကြည့်ဘူးလားနဲ့ စုံနေတာပါဘဲ။
နောက်ပြီး ဘိလပ်ဖြစ် ဂျိန်းစ်ဘွန်း ဇာတ်ကားတွေ အရမ်းများပေမဲ့ ဇာတ်ကားထဲမှာ တရားနာ ရေစက်ချ အမျှဝေတဲ့ အခန်းတွေ ဘာဖြစ်လို့ မပါရတာလဲ ဆိုတာက တစ်မျိုး၊ ဘိလပ်မှာကော မစိုးရိမ်တိုက် မဟာဂန္ဓာရုံတိုက်တို့လို စာသင်တိုက်ကြီးတွေ ပေါများသလားဆိုတာက တစ်ဖုံ၊ ဘိလပ်က ကာလသားခေါင်းဆောင်က တုံးဖလားက ကာလသားခေါင်းဆောင် ကိုစိန်မောင်လောက် ခန့်ခန့်ညားညား ရှိသလားဆိုတာက တစ်မယ်၊ ဘိလပ်က ရေတွင်းက တုံးဖလားတစ်ရွာလုံးအသုံးပြုနေတဲ့ ရေတွင်းလောက် ရေကြည်ကြည်လင်လင်ကော ရှိရဲ့လား ဆိုတာတစ်မှောင့်၊ ဘိလပ်ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်က တုံးဖလားရွာဦးကျောင်းဆရာတော် ဦးသောမလောက် သဘောကောင်းရဲ့လား ဆိုတာက တစ်သွယ်။ စသဖြင့် စသဖြင့် အမယ်မယ်သော ထင်ရာ မြင်ရာတွေကို ဇွတ် မေးမြန်းကြလေရဲ့။
ဒီကောင်တွေ ငါငယ်ငယ်တုန်းက အတိုင်းပါဘဲလား၊ ဘာမှ အသိပညာအတတ်ပညာ မပြောင်းလဲ ကြသေးပါလားဆိုပြီး သနားစိတ်ဝင်နေမိတယ်။ သူတို့မေးတဲ့ မေးခွန်းတိုင်းကိုလဲ အင်း.. အဲ... ကောင်းပါတယ် စသဖြင့်သာ ရေလိုက်ငါးလောက် ဖြေပေးလိုက်ရတယ်။ မောင်ရင်တို့ထင်ထားသလို ဘိလပ်ဆိုတာ တုံးဖလားရွာနဲ့ ဘာမှ မတူဘူး၊ တစ်ခြားစီဘဲ လုိ့ မပြောရက်ဘူး။ ပြောပြရင်လဲ ယုံကြမှာမှ မဟုတ်တာ။ တော်ကြာ အာဂမယုတ္တိ သဘာဝယုတ္တိတွေနဲ့ ဖြေခိုင်းနေမှ စကားကြောရှည်ပြီး ဖုန်းဖိုး များများ ကုန်ရချည်သေးရဲ့။ နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးတဲ့သူကို နိဗ္ဗာန်အကြောင်းရှင်းပြရ ခက်သလို ဘိလပ်မရောက်ဖူးသေးတဲ့သူတွေကိုလဲ ဘိလပ်အကြောင်း ရှင်းပြရ အတော်ခက်တာကလား။
ဘဘတို့ တုံးဖလားရွာက လူမှုရေး ပညာရေး ကျန်းမာရေး နိုင်ငံရေး ဘာမှ သိကြတာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီမိုကရေစီ၊ ဆိုရှယ်လစ်၊ ကွန်မြူနစ်၊ ဟိန္ဒူ အစ္စလာမ် ကျူး ခရစ်ယာန် ဂျိန်း ဘီအေ အမ်အေ ပီအိပ်ခ်ျဒီ။ ဘာဆို ဘာမှ မသိကြဘူးလေ။ သူတို့သိတာက မိုးတွင်းမှာ လယ်ထွန် ကောက်စိုက် ဆောင်းပိုင်းမှာ စပါးရိတ်၊ ကျွဲကျောင်း နွားကျောင်း အရွယ်ရောက်လာရင် အိမ်ထောင်ပြု ကလေးမွေး။ ဒါလောက်ဘဲ သိကြတာကလား။ ပြီးတော့ တစ်ကမ္ဘာလုံးက လူတွေအားလုံးလဲ သူတို့ တုံးဖလားရွာသားတွေလို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေချည်းလို့ ထင်နေကြလေရဲ့။
ဘဘလဲ အဲဒီ တောကြီးမျက်မဲထဲက ရွာကနေ လာခဲ့တဲ့ သူဆိုတော့ ဒီဇင်ဘာခရစ်စမတ်အကြောင်း ဘာမှ ကောင်းကောင်း မသိပါဘူး။ ပြီးတော့ ဒီဇင်ဘာ ပိတ်ရက်မှာ ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်းလဲ မသိတော့ပါဘူး။ တစ်အိမ်ထဲ အတူနေတဲ့ အဘိုးအိုကတော့ ခရစ်စမတ်အိဗ်နေ့ကစပြီး အဓိဋ္ဌာန်တရားစခန်းဝင်မယ်တဲ့။ နှစ်သစ်ကို တရားရှုမှတ်ရင်း ကူးတော့မယ်တဲ့။ အဲဒါ မောင်ရင်ကော စိတ်ဝင်စားလား စိတ်ဝင်စားရင် ကြိုတင် စာရင်းပေးထားတဲ့။ နို့မို့ဆို နေရာ အခက်အခဲ ရှိနိုင်တယ်တဲ့။ ဘယ့်နှယ် ပြောရက်လိုက်လေခြင်း။ လူအများစုက ခရစ်စမတ်အိဗ်နေ့မှာ အပြတ်ကဲကြဖို့ ဟိုတယ်တွေမှာ ကြိုတင် ဘုတ်လုပ်ထားနေကြတဲ့ ကာလမှာ တရားစခန်း ဘုတ် လုပ်ရမယ်တဲ့။ ပြော ပြောချင်ဘူး။ ဂျပန် မိတ်ဆွေတစ်ယောက် ပြောတာကြားဖူးတယ်။ ဂျပန်မှာဆို ခရစ်စမတ်အိဗ်နေ့အတွက် ဟိုတယ်တွေ ဘုတ်လုပ်ရင် တစ်လ နှစ်လ ကြိုတင် လုပ်ရတယ်တဲ့။ နို့မဟုတ်ရင် ဟိုတယ်အခန်းတွေ လုံးဝ မအားတော့ဘူးဆိုဘဲ။ ခေတ်ကာလ သားသမီးတွေများ တယ်လဲ မျက်စိပွင့်ကြသကိုး။
တစ်ကိုယ်ထဲ သမားပီပီ ခရစ်စမတ်ကို ဖာသိဖာသာဘဲ ကုန်ဆုံးလေ့ရှိတဲ့ ဘဘကိုမှ တဂ်ရက်လိုက်လေခြင်းနော်။ တဂ်တာမှ တစ်ယောက်ထဲ မဟုတ်ဘူး။ သုံးယောက်ကြီးများတောင်။ ဘယ်သူတွေများပါလိမ့်။ မခို့တရို့နဲ့ ရို့စ်၊ ဟန်ချီနေတဲ့ ကန်ဒီ။ အထိမခံတဲ့ မိစံ။ သူတို့ သုံးယောက်ဘဲ။ တော်တော်ဆိုးတဲ့ ကလေးတွေ။
ကဲ တဂ်စာကျွေးတဲ့ မီးမီးတို့ရေ..
ဘဘကတော့ ဒီဇင်ဘာ ပိတ်ရက်မှာ ဘာမှ မယ်မယ်ရရ လုပ်စရာ မရှိပါဘူး။ အတူနေအိမ်က အဘိုးအိုလို တရားဘက်လဲ အဓိဋ္ဌာန်နဲ့ မလိုက်နိုင်၊ ကိုရင်တို့လို ကူဖော်လောင်ဖက်ကလဲ မရှိ၊ ဆရာဟန်ကြည်တို့လို ဒါမနူး သားသား မီးမီးတွေနဲ့လဲ စာသင်ရင်း မပျော်နိုင်၊ ကမောင်လေးတို့လို ဘီဘီလဲ မကြိုက်။ ဆိုတော့ကာ ဒီဇင်ဘာ ပိတ်ရက်တွေမှာ အိမ်မှာဘဲ အေးအေးဆေးဆေး နေရင်နေဖြစ်မယ်။ ဒါမှ မဟုတ် စိတ်ပေါက်လာရင် ပုတီးသုံးကုံး လည်ပင်းဆွဲပြီး ၀တ်ဖြူစင်ဝတ်ပြီးသကာလ ဘက်ကင်ဟမ်နန်းတော်ရေ့၊ လန်ဒန်အိုင်းရှေ့၊ တာဝါဘရေ့ဂ်ျတို့နား တစ်လျှောက် အလှည့်ကျ လှည့်ပတ်ပြီး ပုတီးတစ်ကုံးကျစီ စိပ်ရမလား စိတ်ကူးထားတယ်။
တကယ်လို့ မီးမီးတို့လဲ ဘက်ကင်ဟမ်နန်းတော်ရှေ့၊ လန်ဒန်အိုင်းရှေ့၊ တာဝါဘရေ့ဂ်ျတို့ အနီးအနားတစ်လျှောက် လျှောက်လည်ဖြစ်ခဲ့ရင် ပုတီးသုံးကုံး လည်ပင်းမှာ ဆွဲပြီး ၀တ်ဖြူစင်ဝတ်စုံကြီးဝတ်ထားတဲ့ ခန့်ခန့် ချောချော ထောင်ထောင်မောင်းမောင်း လူပျိုကြီးတစ်ယောက်ကို တွေ့မြင်ခဲ့လို့ရှိရင် အဲဒီလူဟာ တစ်ခြားလူ မဟုတ်ဘူး ဘဘကိုယ်တိုင်ပါဘဲလို့ ပုံသေကားချပ်မှတ်ပြီး (တစ်ကျပ် တန်သည်ဖြစ်စေ နှစ်ကျပ်တတ်နိုင်သည် ဖြစ်စေ... အဲလေ..ယောင်လုိ့...) ထပ်ကြပ်မကွာလိုက်လံ နှုတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်လို့။ ။း)
သပြေညိုအလိုက် ဒီဇင်ဘာ ကဗျာလက်ဆောင်
တို့မြေက ပျို့မေတွေ တဂ်ပါတဲ့
ဘိုးတော်လို မိုးမျှော် ကြည့်ကာပ
ပုတီးစိပ်ကာ ထီးရိပ်မှာ ခိုရအောင်
ဒီဇင်ဘာ ကြည်လင်ရာ များရယ်နဲ့
ရေးစရာ အိုင်ဒီယာ သိပ်မရှိဘဲ ကွန်ပျူတာရှေ့ထိုင်ကာ တဂ်ပို့စ်အတွက် ရောက်တတ်ရာရာ ရေးမယ်ဆိုပြီး ကီးဘုတ်ပေါ် လက်ချောင်းလေးတွေ တင်လိုက်တော့ ဂလို ဂလို ခပ်ပေါပေါတွေ ဖြစ်ထွန်းလာလေရဲ့။ ဂလိုကြောင့် ခပ်ပေါပေါနဲ့ အယ်လာ့ဂျစ်ရှိသူများ ခွင့်လွှတ်တော်မူကြပါကုန်သော်ဝ်။ (ဘဘသူကြီးမင်း)။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 15:49 25 comments:
မသုံးတတ်သုံးတတ် ဂျီတော့ခ်သုံးရင်း ကိုရင်သာဒွန်းနှင့်မဒမ်သာဒွန်းတို့ ဆုံဖြစ်ကြသည်။ ထုံးစံအတိုင်း နေ့စဉ်ရက်ဆက် တွေ့ပါများတော့ သံယောဇဉ်ကြိုးတွေက ရစ်ပတ်ချည်နှောင်လို့။ တစ်ရက်နေလို့မှ တစ်ခါ မတော့ခ်ရရင် တစ်ရက် လူဖြစ်ရကျိုး မနပ်ဖူးလို့ ဥပါဒါန်စွဲနေကြလေပြီ။ အဖြူလား အမဲလား မသဲကွဲခင်မှာ အသဲစွဲအောင် ကိုရင်နှင့်မဒမ် ချစ်ခင် စုံမက်သွားကြလေ၏။ ကံကောင်းတယ် ဆိုရမှာပ။ နှစ်ယောက်လုံးက ရွက်ကြမ်းရည်ကျို အဆင့်လောက် ရုပ်ရည် ရှိကြပေလို့။ သို့ပေမဲ့ ကိုရင်က ဖြူတုတ်တုတ် မဒမ်က ညိုမဲမဲ။ ဒါပေမဲ့လဲ အသဲကွဲအောင် ချစ်လိုက်ကြတာ မိုးမမြင်လေမမြင်။
နှစ်ယောက်သား အပြင်မှာ စဆုံတွေ့တဲ့နေ့ကစပြီး ကိုရင်နှင့်မဒမ် လင်မယား အရာမြှောက်ကြလေတော့၏။ မြန်လိုက်သည့် ဖြစ်ခြင်း။ ဒုံးပျံခေတ်ပေကိုး။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အချစ်တွေ ပိုကြတော့ သ၀န်တိုတာတွေက ပါလာရော။ အွန်လိုင်းမှာ ဘယ်သူ ဘယ်ဝါနဲ့ ချတ်တင်ရိုက်နေတာ မဟုတ်လား ဘာညာ သာရကာဖြင့် အချင်းချင်း စကားနာထိုးကြသည်မှာ နေ့စဉ်။ သို့ဂလိုကြောင့် ကိုရင်နှင့်မဒမ်တို့နှစ်ယောက် အကွက်ချတိုင်ပင်ပြီး အီးမေးလ်အင်တာနက် လုံးဝမရရှိနိုင်သည့် တောကြီးမျက်မဲထဲက ရွာလေးတစ်ရွာသို့ ပြောင်းရွှေ့ပြီး ချစ်ခင်ကြင်နာစွာ ဘ၀ခရီး အတူတူ လျှောက်လှမ်းကြလေတော့၏။ သံသယကင်းကင်း အချစ်ပြင်းပြင်းပေါ့။
အိမ်ထောင်ကျပြီး ၁၀ လ လောက်ကြာတဲ့အခါမှာ မဒမ်တစ်ယောက် ဗိုက်နာလာပါလေရော။ ဗိုက်နာလာလိုက်သမှ သဲသဲမည်းမည်း။ ကွမ်းသီးလုံးခန့် ချွေးသီးချွေးပေါက်များ မဒမ့်ခန္ဓာကိုယ်မှ တစ်လှိမ့်လှိမ့် စီးဆင်းလာရသည်ထိ နာကျင်လေသည်။ ကိုရင်တစ်ယောက်လဲ တစ်ခါမှ အတွေ့အကြုံမရှိဖူးလေတော့ ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်းမသိ။ ဗိုက်အရမ်းနာသည်က တစ်ကြောင်း ကိုရင်ရဲ့ မလုပ်တတ် မကိုင်တတ် အေးတိအေးစက် အမူအယာကို မြင်နေရသည်က တစ်ကြောင်းတို့ကြောင့် မဒမ်တစ်ယောက် ဒေါသထွက်မှန်းမသိ ထွက်နေလေသည်။ ထို့ကြောင့် ကိုရင့်အနားကပ်ကာ ကိုရင်ရဲ့ ရင်ဘတ်ကြီးကို တဘုန်းဘုန်း ထုပြီး "အခုလို ဗိုက်နာရတာ ရှင့်ကြောင့် ရှင့်ကြောင့် အီးဟီးဟီး" ဟူ၍ ကြွက်မနိုင် ကျီမီးရှို့လုပ်ပြီး ကိုရင့်ကိုသာ မဲနေလေတော့၏။
"မိန်းမရာ.. စိတ်ထိန်းစမ်းပါဦးဟ။ အိမ်နီးနားချင်းတွေ ကြားသွားရင် ရှက်စရာကြီး။ ပြီးတော့ ငါ့ကိုချည်း အပြစ်ပုံမချပါနဲ့။ အခုဟာက နှစ်ယောက်လုံးကြောင့် ဖြစ်ရတာပါ။ ငါလဲ အခု ဘာလုပ်ရမလဲ စဉ်းစားနေတာပါ"
"အမလေးးးလေးးးးး... အခုထက်ထိ ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာ စဉ်းစားနေတုန်းဘဲလား။ ဒီမှာ နာလွန်းလို့ သေတော့မယ်။ ပူလဲ အရမ်းပူတာဘဲ။ သွား...ရွာမြောက်ပိုင်းက အရီးမြကို သွားခေါ်ချေ။ အမလေးနော်... နာလိုက်တာ... အမေရေ... အီးဟီးဟီး။ အမေ့သမီး လင်ယူစောခဲ့လို့ အခု ၀ဋ်ခံနေရပြီ... ရှီးး ဖူးးးးးး ကျွတ်.. ကျွတ်.. ကျွတ်.."
မဒမ်ပြောမှ ကိုရင်တစ်ယောက် အရီးမြကို ပြေးသတိရမိလေသည်။ အရီးမြက ဒီလိုမျိုး ဗိုက်နာတာကို ဖြေရှင်းပေးတဲ့ နေရာမှာ နာမည်ကြီးသည်။ ထို့ကြောင့် ရွာမြောက်ပိုင်းကို အမြန်ပြေးပြီး အရီးမြကို သွားခေါ်ခဲ့လေသည်။ အိမ်ရောက်တော့ အရီးမြက မဒမ့်ဗိုက်ကို ဟိုစမ်း ဒီစမ်း ကိုင်စမ်းကြည့်လေသည်။ ကိုရင်ရော မဒမ်ပါ အားကိုးတကြီးနဲ့ အရီးမြမျက်နှာကို အကဲခတ်နေလေသည်။ သို့သော်..
"အင်း.. ပြောရမှာ စိတ်မကောင်းလိုက်တာ။ ငါလဲ အခုလိုမျိုး လူနာကို တစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးဘူး။ ဒါကြောင့် ငါလဲ ဘာမှ မလုပ်တတ်ဘူး။ အကောင်းဆုံး အကြံပေးချင်တာကတော့ ချက်ချင်း မြို့တက်ပြီး အထူးကုဆေးခန်းကို သွားတာ အကောင်းဆုံးပါဘဲ"
အရီးမြလက်လျော့လိုက်ပြီ ဖြစ်သောကြောင့် ကိုရင်နှင့်မဒမ် ကားကြုံဖြင့် မြို့တက်ပြီး အထူးကုဆေးခန်း တစ်ခန်းသို့ သွားရလေ၏။ ဆေးခန်းသို့ ရောက်သောအခါ မဒမ့်ကို အရမ်းသနားလှသောကြောင့် ဆရာဝန်မအား "ဆရာမရယ်.. ကျနော့် မိန်းမကို အပ်ထရာဆောင်း ရိုက်ပေးပါဗျာ။ ဗိုက်ထဲမှာ ဘာရှိလဲ သိချင်လို့ပါ" ဟု အသနားခံ အကူအညီတောင်းလေ၏။ ဆရာဝန်မလဲ လူနာကုတင်နားလာပြီး မဒမ့်ဗိုက်ကို လက်နဲ့စမ်းကြည့်လေ၏။ ထို့နောက် နားကြပ်ဖြင့် မဒမ့်ဗိုက်တစ်လျှောက် စမ်းသပ်နားထောင်လေ၏။
"ကိုရင့် မဒမ်က အပ်ထရာဆောင်း ရိုက်ဖို့ မလိုပါဘူး။ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းတင် ကိစ္စပြီးပါတယ်။ ကျမတို့က မလိုအပ်ရင် ဘယ်လူနာကိုမှ အပ်ထရာဆောင်းရိုက်မပေးပါဘူး"
"ဒါဖြင့် ကျနော်တို့ လာခဲ့ရကျိုး မနပ်ဖူးပေါ့"
"အဲဒီလိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အခု သောက်ဆေး ပေးလိုက်မယ်။ အဲဒါလေး သောက်လိုက်ရင် သက်သာ သွားမှာပါ။ နောက်တစ်ခါ နာရင်လဲ အခုလို ဆေးမျိုးကိုဘဲ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းမှာ ၀ယ်သောက်ပေါ့၊ ရှောရှောရှူရှူ ဖြစ်သွားမှာပါ"
"တော်တော် အကြင်နာတရားမရှိတဲ့ ဆရာဝန်မဘဲ" ဟု စိတ်ထဲက ရေရွတ်ရင်း ဆရာဝန်မ ပေးသည့် စားဆေးကိုသာ ယူပြီး ပြန်ခဲ့ရလေသည်။ ဆေးစားစားချင်းတော့ ဗိုက်နာသက်သာသည်ဟု မဒမ်ကပြောသည်။ တော်ပါသေးရဲ့။ ဗိုက်နာ နဲနဲသက်သာသည်ဆိုလျှင် ငွေကုန်လူပန်းရကျိုး နပ်ပေပြီဘဲ။
သို့သော် မြို့မှနေပြီး ရွာသို့ အပြန် လမ်းခရီး၌ မဒမ့်ဗိုက်အနာ ပြန်ပေါ်လာလေ၏။ ရိုးရိုးဗိုက်နာတာ မဟုတ်တော့လဲ ဆရာဝန်မဆေးက မစွမ်းတော့ဘူး ထင်ပါရဲ့။ မဒမ်တစ်ယောက်လဲ ဗိုက်ဖောင်းဖောင်းလေးအား သူ့လက်ကလေးဖြင့် သက်သာလို သက်သာငြား ပွတ်ပွတ်နေလေ၏။ အိမ်ထောင်ရှင်မ ဒုက္ခကလဲ မသေးပါလားနော်။ ကိုရင်လဲ ဘာမှ မလုပ်ပေးတတ်လေတော့ မဒမ့်ဗိုက်ကလေးအား မဒမ်နည်းတူ ဟိုကိုင်ဒီကိုင်ဖြင့် ပွတ်သပ်ပေးနေမိလေ၏။
"မဒမ်ရေ.. ဗိုက်ထဲမှာ လှုပ်စိ လှုပ်စိနဲ့ပါလား"
"အဲဒါကြောင့် ဗိုက်နာနေတာ။ အဲဒါ ရှင့်ကြောင့် ရှင့်ကြောင့်.. အမလေး.... ရှီးးးးးးး နာလိုက်တာနော်"
ထိုအပြန်ကားကြုံဖြင့်ပင် ရွာထဲမှ အပျိုကြီးမိသိန်းကြည်လဲ စီးနင်းလိုက်ပါလာလေ၏။ မိသိန်းကြည်သည် မြို့မှ ကုန်မျိုးစုံအား ၀ယ်ယူပြီး ရွာထဲမှာ လက်လီပြန်ရောင်းနေသူဖြစ်၏။ ကလေးကစားစရာမှစပြီး အင်္ဂလိပ်ဆေး မြန်မာပရဆေးအထိ သူ့ဆိုင်မှာ ရနိုင်လေ၏။ မိသိန်းကြည်တစ်ယောက် မဒမ်ဗိုက်နာနေသည်ကို ကြည့်ပြီး ကိုရင်အား မေးမြန်းလေ၏။
"မဒမ် ဗိုက်နာနေတာ ကြာပြီလား"
"ဒီနေ့မနက်ကစပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန် နာလာတာလေ။ အရီးမြကို ပြကြည့်တော့လဲ မြို့တက်ပြီး အထူးကုဆေးခန်းကို သွားခိုင်းတယ်။ အထူးကုဆေးခန်းရောက်တော့လဲ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းကို ထပ်လွှဲပေးတယ်။ ကျနော်လဲ ဘာမှ မသိတော့ဘူး။ ဟိုဘက်တစ်ရွာကျော်က ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းကိုဘဲ သွားရုံပေါ့"
ဟူ၍ ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင် ဇာတ်ကြောင်း လှန်ပြရလေတော့၏။
"ကျမကို ယုံကြည်ရင် ကျမဆိုင်မှာ ဆေးတွေ ရှိပါတယ်။ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း သွားစရာ မလိုပါဘူး။ ရွာရောက်ရင် ဆိုင်လိုက်ပြီး ယူပေါ့။ မဒမ်ကို ဆေးတိုက်ပြီး စောစောသာ အိပ်ခိုင်းလိုက်။ မနက်မိုးလင်းရင် ကောင်းသွားလိမ့်မယ်၊ အားလုံး ချောချောမောမော ဖြစ်သွားမှာပါ"
ကိုရင်တစ်ယောက် ရွာပြန်ရောက်တော့ မိသိန်းကြည်ဆိုင်သွားပြီး ဆေးတစ်ထုပ် သွားဝယ်လေ၏။ မိသိန်းကြည်ရဲ့ အညွှန်းအတိုင်း ဆေးနှစ်လုံးတိတိ မဒမ့်အား တိုက်လိုက်ပြီး စောစော အိပ်ခိုင်းလိုက်လေ၏။ မဒမ်နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်နေသည်ကို မြင်ရမှ ကိုရင်တစ်ယောက် စိတ်သက်သာရာ ရလေ၏။ အပျိုကြီး မိသိန်းကြည်ဆေးက စွမ်းပေသားဘဲ။ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ အပျိုကြီးထင်ပါ့။
မနက်ဝေလီဝေလင်း အချိန်၌ မဒမ်တစ်ယောက် အိပ်ရာမှ စောစောထ ကိုယ်လက်သန့်စင်ပြီး ရွာဦးကျောင်းဆွမ်းပို့ဖုိ့ ဆွမ်းဟင်းဆွမ်းထမင်း ချက်ပြုတ်နေလေ၏။ ပါးစပ်မှလဲ ဘ၀သံသရာသီချင်းလေးအား တိုးတိုးညှင်းညှင်း သီကျူးနေလေ၏။ ဒါဆို သေချာပြီ မဒမ် ဗိုက်နာ သက်သာသွားပြီ။ ကိုရင်လဲ အိပ်ရာထက်မှ လူးလဲထပြီး မျက်နှာသစ်ဖို့ ရေအိုးထားရာ အိမ်ကပြင်သို့ ထွက်ခွါလာစဉ် မဒမ်က ဆီးကြိုပြီး "ကိုရင်.. အခု ဗိုက်နာတာတွေ ယူပစ်လိုက်သလို သက်သာသွားပြီ။ အိမ်သာတော့ နှစ်ခါ သုံးခါ တက်လိုက်ရတယ်။ ဒါနဲ့ မိသိန်းကြည်က ဘာဆေးပေးခဲ့တာလဲ" ဟု မေးခွန်းတစ်ခု မေးလေတော့၏။ "သူကတော့ ပြောခဲ့တာဘဲ။ ဂြိုဟ်တု ၀မ်းပုပ်ချဆေးတဲ့။ မအိပ်ခင် နှစ်လုံးလောက် သောက်လိုက်ရင် မနက်လင်းတာနဲ့ တစ်ခါထဲ ရှင်းသွားစေရမယ်" တဲ့။ ။ (Select and see the blank below) :)
"မှန်လိုက်တာ ကိုရင်။ ရှင်စီမံတဲ့ ရခိုင်မုန့်တီ လက်သုပ်ကို အားရပါးရ စားလိုက်မိလို့ အခုလို ဗိုက်အကြီးအကျယ်နာရတာ အခုမှ နေထိထိုင်သာ ဖြစ်သွားတော့တယ်"
"အာ.. မိန်းမကလဲ။ မိန်းမဘဲလေ ငရုပ်သီးမုန့်တွေ နင်းကန်ထည့်လိုက်တာ။ ဒါကြောင့် ငါ့မိန်းမ ခံရတာ။ အင်းလေ... အမှန်ကတော့ ဒို့နှစ်ယောက် ပေါင်းလုပ်ကြလို့ အခုလို ငါ့မိန်းမ ဗိုက်နာရတာ မဟုတ်လား"
မဒမ် လေချုပ်ဝမ်းချုပ်နေသည်ကတစ်ကြောင်း၊ မုန့်တီဖတ်ကိုယ်တိုင်က အပုပ်စာ ဖြစ်နေသည်က တစ်ကြောင်း၊ ငရုပ်သီး အစိမ်းမှုန့်တွေ အများအပြား ထည့်လိုက်သည်က တစ်ကြောင်း၊ ထိုသို့သော အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် လေထိုးလေအောင့်ဖြစ်ကာ ပစ္စလက္ခနာသော မဒမ့်ဗိုက်နာခြင်းဝေဒနာသည် မိသိန်းကြည်၏ ဂြိုဟ်တု ၀မ်းပုပ်ချဆေးနဲ့ တွေ့လိုက်သောအခါမှသာ ဗိုက်ထဲရှိ အပုပ်အစပ်များ အားလုံး သွန်ထုတ်ပစ်လိုက်ပြီး လုံးဝ နေကောင်း စားကောင်း ထိုင်ကောင်း အိပ်ကောင်း ပြောကောင်း ဆိုကောင်း သွားကောင်း လာကောင်း အားလုံးအကောင်း ဖြစ်နေလေတော့သတည်း။ ။ ပြီးပြီ။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 22:45 34 comments:
သီတင်းကျွတ်ကာလ၌ ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်အား ကန်တော့ရန်ဟူသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့် ကိုရင်တက်ပု ရွာသို့ ပြန်ရောက်လာ၏။ ငါးနှစ်ခန့် ရွာနဲ့ ကင်းကွာသွားသည့်အတွက် ရွာသူရွာသားတို့သည် သူ့အား ကောင်းကောင်းပင် မမှတ်မိကြ။ နောက်မှ ကိုရင်တက်ပုအစစ်ကြီးမှန်း သဘောပေါက်ကြလေ၏။ ကိုရင်တက်ပုသည် "မန္တလေးစကား မော်လမြိုင်အစား ရန်ကုန်အကြွား" ဆိုသည့်အတိုင်း ရန်ကုန်မှာ နေခဲ့သူပီပီ စကားပြောတိုင်း ကြွားလုံးလေးတွေ ပါလာတတ်၏။ ရွှေတိဂုံ ဘုရားပရ၀ုဏ်ကြီးက တုံးဖလား တစ်ရွာလုံးဧရိယာထက် ပိုမိုကြီးမားကျယ်ပြန့်ကြောင်း၊ ရန်ကုန်မြို့ရှိ ကွန်ဒိုအိမ်တစ်လုံးတွင် နေထိုင်ကြသည့် လူဦးရေသည် တုံးဖလားတစ်ရွာလုံးရှိ လူဦးရေထက် ပိုမြားပြားကြောင်း၊ ရန်ကုန်သူ ရုပ်အဆိုးဆုံးပင်လျှင် တုံးဖလားရွာသူ ကွမ်းတောင်ကိုင်ထက် ပိုလှပချောမောကြောင်း၊ ရန်ကုန်မြို့ပေါ် ပျံသန်းသည့် လေယာဉ်ပျံကြီးသည် လေးခွနဲ့ ပစ်လို့ရလောက်အောင် ခပ်နိမ့်နိမ့် ပျံသန်းလေ့ရှိကြောင်း၊ ရန်ကုန်မြို့တွင်း ဖြတ်သန်းစီးဆင်းသည့် ငမိုးရိပ်ချောင်းကြီးသည် တုံးဖလား ချောင်းထက် အဆ သုံးဆယ်ခန့် ပိုမိုကြီးမားကြောင်း၊ နံနက်အရုဏ် ဆွမ်းခံကြွလေ့ရှိသည့် သံဃာတန်းရှည်ကြီးမှာ ၂ မိုင်မက ရှည်လျားကြောင်း၊ သူနေထိုင်သည့် စာသင်တိုက်မှ စာချဘုန်းကြီးတစ်ပါးဝတ်သည့် သင်္ကန်းတစ်စုံ တန်ဖိုးသည် ရွာက နွားတစ်ရှဉ်းတန်ဖိုးထက် ဈေးပိုကြီးကြောင်း စသဖြင့် စသဖြင့် အာပေါင်အာရင်းသန်သန် ကြွားတတ်လေ၏။ ထို့အပြင် စကားပြောလျှင် မကြာမကြာ အင်္ဂလိပ်လိုပါ ညှပ်ပြောလေ့ရှိ၏။ ထို့ကြောင့် ကိုရင်တက်ပု တစ်ယောက် ရွာသူရွာသား အများစု၏ အထင်ကြီးလေးစားခြင်းကို ခံရလေသည်။ ကိုရင်တက်ပု၏ ကြွားလုံးများကို ရွာသူရွာသားများသည် ပါးစပ်အဟောင်းသား မျက်စိအပြူးသားဖြင့် စိတ်ဝင်တစား နားထောင်နေကြရရှာလေ၏။
တောရွာဓလေ့အတိုင်း အရေးအကြောင်းဆို ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဝင်းထဲ စုကြစမြဲဖြစ်၏။ ယနေ့သည်လည်း မနက်ဖန် ဥပုသ်နေ့မှာ ဥပုသ်သည်များအား ဥပုသ်ဆွမ်းကျွေးဖို့အတွက် အပျိုလူပျိုများ ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းအတွင်း ဥပုသ်ဆွမ်း ချက်ပြုတ်ကြ၏။ ဥပုသ်ဆွမ်း ဆွမ်းဟင်းများ ချက်ပြုတ်ပြီးသည့်အခါ ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်က အပျိုလူပျိုများအား ဗီဒီယိုပြသပေး၏။ အပျိုများတောင်းဆိုချက်အရ မြန်မာဇာတ်ကားတစ်ကားနှင့် လူပျိုများ တောင်းဆိုချက်အရ နိုင်ငံခြား စစ်ကားတစ်ကား စသဖြင့် အချိုးကျ ပြသပေး၏။ ရွာထဲရှိ ကလေးလူကြီးများလည်း ရွာဦးကျောင်းမှ မီးစက်အင်ဂျင်သံ ကြားရသဖြင့် ဗီယိုပြဖို့ မီးစက်လည်တယ် ဆိုတာကို ကျိန်းသေပေါက် သိရှိကြလေ၏။ ထို့ကြောင့် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဝင်းထဲ လာရောက်ပြီး ဗီဒီယို ကြည့်ကြလေ၏။
နိုင်ငံခြားစစ်ကား ပြသသည့် အလှည့်ရောက်တဲ့အခါ ရွာသူရွာသားများက ဘာသာပြန်ပေးရန်အတွက် ကိုရင်တက်ပုအား အကူအညီတောင်းကြလေ၏။ နဂိုကမှ ခပ်ကြွားကြွားနေတတ်သည့် ကိုရင်တက်ပုသည် ဖန်သားပြင်ရှေ့ ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီး သိသမျှ မှတ်သမျှ ဘာသာပြန်ပေးလေတော့၏။ စစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် စကားလုံးတွေက ခပ်ကြမ်းကြမ်းပင်။ ဇာတ်ကားထဲ၌ Bond, James Bond ဟုပြောသံ ကြားလျှင် ဒါက မင်းသားက သူ့ကိုယ်သူ မိတ်ဆက်ပေးနေတာ ဟူ၍လည်းကောင်း၊ F.... you man ဟုပြောလျှင် ဒါက ဆဲဆိုတာဟူ၍လည်းကောင်း၊ Sh...ဟုပြောလျှင် ဒါလဲ ဆဲရေးတိုင်းထွာနေတာဟူ၍ လည်းကောင်း၊ Move ဆိုလျှင် ဒါက တိုက်ခိုက်ဖို့ ရှေ့တက်ခိုင်းတာ ဟူ၍လည်းကောင်း၊ Fire ဆိုလျှင် ဒါက ပစ်မိန့်ပေးတာ ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ Retrieve ဆိုလျှင် ဒါက အခြေအနေမကောင်းလို့ တပ်ပြန်ဆုတ်ခွါခိုင်းတာ ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ စတိုင်လ်ကျကျ ဘာသာပြန်ပေးလေတော့၏။ ရွာသူရွာသားများမှာ ကိုရင်တက်ပုအား အထင်ကြီးလိုက်ကြသည့် ဖြစ်ခြင်း။ သို့သော် ရွာသားများ သတိမထားမိသည်မှာ ကိုရင်တက်ပုသည် သူနားလည်သည့် အင်္ဂလိပ်စကားကို ကြားလျှင် အတင်းဘာသာပြန်ပေးတတ်၍ နားမလည်သည့် အင်္ဂလိပ်စကားကိုမူ မကြားလိုက်သလိုလို တစ်ခြားဘက် မျက်နှာမူလိုက်ပြီး သတိမထားမိလိုက်သလိုလို၊ အိပ်ငိုက်နေသလိုလို ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင် နေတတ်ခြင်းပင်ဖြစ်၏။ လမ်းပြင်သည့် လမ်းဗိုလ်အား ကားဖြင့် ခေါ်ဆောင်ပြီး လမ်းအခြေအနေကို ပြသသည့်အခါ ချောမွတ်ပြေပြစ်နေသည့် လမ်းအခြေအနေနဲ့ ကြုံခိုက် လမ်းကို သေချာကြည့်ရှုတတ်ပြီး ချိုင့်တွေ ခွက်တွေ ပြည့်နှက်နေသည့် နေရာနဲ့ ကြုံလျှင်မူ အိပ်ရေးမ၀သည့်ပုံစံဖြင့် အိပ်ငိုက်နေတတ်သကဲ့သို့ပင်တည်း။
တုံးဖလားရွာဦးကျောင်း၌နေထိုင်ရင်း တစ်နေ့သောအခါ ကိုရင်တက်ပု တစ်ယောက် အကြီးအကျယ် နေထိုင်မကောင်း ဖြစ်လေ၏။ ရပ်ရွာထဲရှိ ရိုးရာဗမာဆေးဆရာနဲ့ ကုသသော်လည်း လုံးဝ နလန်ထူနိုင်ခြင်း မရှိပေ။ နေ့ရက်ကြာလာသည်နဲ့အမျှ ကိုရင်တက်ပု အားအင်ဆုတ်ယုတ်လာပြီး ဖြူဖတ်ဖြူရော် ယဲ့သဲ့သဲ့ ဖြစ်လာလေ၏။ ဒီအတိုင်း ရွာမှာ ရိုးရာဆေးနဲ့ ကုသနေလျှင် လုံးပါးပါးသွားနိုင်သည်ကို သတိပြုမိ၍ သူကြီးမင်း ဦးဆောင်ကာ နွားလှည်းတစ်စီး ကပြီး နီးစပ်ရာ မြို့လေးတစ်မြို့ရှိ ဆေးရုံတစ်ခုသို့ ချီတက်ကြလေတော့၏။ နေ့လည်ခင်း ၁၁ နာရီခန့်လောက် ဆေးရုံသို့ရောက်၏။ လူနာကုတင်များစွာ ရှိနေသည့် ဟောခန်းတစ်ခုထဲ၌ နေရာရ၏။ လူနာတွေလဲ များလှပါဘိတောင်း။
ရောက်ရောက်ချင်း ကိုရင်တက်ပု အားနည်းနေသည်ကို သိ၍ အားဆေးအဖြစ် ဆလိုင်းတစ်ပုလင်း ချိတ်၏။ ညနေခင်းလောက်၌ ဆလိုင်းတစ်ပုလင်း ကုန်သွား၏။ ကိုရင်တက်ပုလဲ နဲနဲ ထူထူထောင်ထောင် ဖြစ်လာ၏။ သို့သော် အားရလောက်အောင်တော့ အခြေအနေမကောင်းသေးပေ။ ညနေပိုင်း၌ ဆရာဝန် ရောင်း လှည့်လာလေသည်။ ကိုရင်တက်ပုရဲ့ လူနာမှတ်တမ်းကို ကြည့်ပြီး အားအရမ်းနည်းနေတဲ့ လူနာမှန်း သိလေ၏။ ဆရာဝန်ကလဲ ခပ်ငယ်ငယ်မို့ ခပ်ပျော်ပျော်ပင် နေတတ်သည်ထင်၏။ ကိုရင်တက်ပုကို ကြည့်ပြီး "အင်း... ကိုရင်ဆိုပေမဲ့ လူပျိုပေါက် အရွယ် ဖြစ်နေပြီ၊ ဒီအချိန်ဟာ လူပျိုစိတ် ပြင်းထန်တဲ့ အချိန်ဘဲ" ဟု စဉ်းကားကာ ကိုရင်တက်ပုအား စနောက်လိုသည့် စိတ်ဖြင့် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပင် "ကိုရင်... လက်ဆော့လေ့ရှိသလား" ဟု ပြုံးပြုံးကြီး မေးလေတော့၏။ ကိုရင်တက်ပုကလဲ အသံယဲ့ယဲ့ဖြင့်ပင် "ဒကာကြီး... ရေချိုးကာနီးတိုင်းတော့ ကိုရင် ဆော့တတ်ပါတယ်" ဟု အတည်ပေါက် ပြန်ဖြေလေ၏။ ဆရာဝန်တစ်ယောက်အံ့သွားကာ "ဟောဗျာ" ဟု အာမေဍိတ် ပြုချင်းချင်းပင် ကိုရင်တက်ပုဆီမှ စကားဆက်လက် ထွက်ပေါ်လာလေ၏။ ထိုအခါမှပင် ကိုရင်တက်ပု မြန်မာစကားကို မြန်မာလိုပင် ဘာသာပြန်မှားနေမှန်း ဆရာဝန် သိသွားလေသည်။ ကိုရင်တက်ပု ဆက်ပြောလိုက်သည့် စကားမှာ... "ရေချိုးကာနီးတိုင်း ချွေးထွက်အောင် ဒိုက်ထိုးတယ်၊ ဘားဆွဲတယ်၊ သိုင်းချတယ်" ဟူ၍ ဖြစ်လေ၏။
အမေးတစ်ခြား အဖြေတစ်ခြား ဖြစ်နေသည်မို့ ဆရာဝန်က "ကိုရင်.. အင်္ဂလိပ်စာ သင်ဖူးသလား" ဟု ဆက်လက် မေးမြန်းပြန်လေ၏။ ကိုရင်က "U.M.A သင်တန်းဆင်းပါဗျ။ ပြီးတော့ ရွာမှာလဲ အင်္ဂလိပ် ဗီဒီယိုဇာတ်ကား ဘာသာပြန်လုပ်ပေးနေတဲ့ ကိုရင်ပါဗျ" ဟု နေမကောင်းဖြစ်နေရင်းပင် ကြွားခွင့်ကြုံသောကြောင့် အားရပါးရ ကြွားလိုက်သေး၏။ ဆရာဝန်က "ဒါဖြင့် ကိုရင် Masturbation လုပ်လေ့ရှိသလား"ဟု ခပ်ပြုံးပြုံးပင် မေးပြန်လေ၏။ ကိုရင်တက်ပုကလဲ "ဒီဆရာဝန် လူကို အထင်သေးအမြင်သေးနဲ့ ပညာလာစမ်းနေသေးတယ်၊ ဒီလောက်အင်္ဂလိပ်စာကတော့ ပျင်းတောင်ပျင်းသေးတယ်" ဟု စိတ်ထဲ ရေရွတ်ပြီး လက်သုံးချောင်း ထောင်ပြကာ "ဒကာကြီး တစ်ရက်ကို သုံးခါတိတိ လုပ်လေ့ရှိတယ်ဗျားး" ဟူ၍ ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားစွာ ဖြေကြားလေတော့၏။
ဆရာဝန်မှာ မျက်လုံးပြူးသွားကာ "ဘုရား ဘုရား တစ်ရက် သုံးခါကြီးများတောင်လား ကိုရင်" ဟု ပြန်မေးလေရာ "ဟုတ်တယ် ဒကာကြီး မနက်အိပ်ရာထတစ်ခါ နေ့လည်ပိုင်းတစ်ခါ ည အိပ်ရာဝင်ခါနီးတစ်ခါ၊ စုစုပေါင်း တစ်ရက် သုံးခါတိတိလုပ်လေ့ရှိပါတယ်" ဟု မှင်သေသေပင် ပြန်ဖြေလေ၏။ ဆရာဝန်ကလဲ "အော်... ကိုရင် အားနည်းနေတာ ဒါကြောင့်ကိုး၊ နဲနဲတော့ လျော့ပါဦး ကိုရင်" ဟု မျက်နှာပျက်ပျက်ဖြင့် အကြံပေးလေရာ ကိုရင်တက်ပု တစ်ယောက် ဆရာဝန် မျက်နှာပျက်သွားသည်ကို သတိထားမိကာ မျက်လုံးပြူးသွားပြီး "တစ်ရက်သုံးခါ တရားထိုင်တာက ဒကာကြီးတို့ မျက်နှာပျက်စရာလား၊ အဲဒီလို တရားထိုင်တာက တကယ် အားနည်းစေတာလား" ဟု အသံခပ်ကျယ်ကျယ် စိတ်ပေါက်ပေါက်ဖြင့် မေးမြန်းလေတော့၏။ ထိုအခါကျမှ ဆရာဝန်ခမျာ ကိုရင်တက်ပုတစ်ယောက် Meditation နှင့် Masturbation ကို ဘာသာပြန်မှားနေမှန်း သဘောပေါက်သွားပြီး စိတ်မထိန်းနိုင်ဘဲ "တဟားဟား" ရယ်မောလေတော့၏။ ထိုရယ်မောသံကြောင့် အနီးရှိ လူနာကုတင်များပေါ်၌ ဆေးအရှိန်ဖြင့် မှိန်းနေကြသော လူနာ အတော်များများ လန့်ဖျတ်ပြီး ခေါင်းထောင် ကြည့်ကြလေတော့၏။
ဆရာဝန်လည်း အရယ်ရပ်ကာ "ကဲ.. ပေးထားတဲ့ဆေးကို မှန်မှန်သောက်နော် ဘုရား၊ လိုအပ်ရင် မနက်ဖန် ဆလိုင်းတစ်လုံး ထပ်ချိပ်ပေးမယ်" ဟု ပြောဆိုကာ ပြုံးစိစိဖြင့်ပင် အနားမှ ထွက်ခွါသွားလေ၏။ ကိုရင်တက်ပုလဲ နားမလည်စွာဖြင့် အနီးနားမှာ ရှိနေသည့် သူကြီးမင်းအား လက်ကုတ်ပြီး "ဆရာဝန်က ဘာဖြစ်လို့ ဒီလောက် သဘောကျပြီး တဟားဟား ဖြစ်သွားရတာလဲ သူကြီးမင်း" ဟု မေးမြန်းလေ၏။ "ကိုရင်က ဆရာဝန်ရဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားကို ဘာသာပြန်မှားပြီး ပေါက်ကရလျှောက်ပြောနေတာကိုး" ဟု ပြောလိုက်သည့်အခါ "ဟင်.. ဘယ်လို ဘယ်လို သူကြီးမင်း" ဟု မျက်နှာငယ်လေးဖြင့် ပြန်မေးလေ၏။ "ဘယ်လိုမှ မဟုတ်ဘူး။ ဒီလို ကိုရင် ဒီလို... တရားထိုင်တာကိုမှ Meditation လို့ခေါ်တယ်၊ အခု Masturbation ဆိုတာက !@#$%^&*()%$#@*&^%၊ အဲဒါကို ပြောတာ" ဟု ခပ်ဆပ်ဆပ် ပြန်ပြောပြလိုက်သည့်အခါ ကိုရင်တက်ပု တစ်ယောက် မျက်လုံးပြူးသွားကာ ဆတ်ကနဲ ခေါင်းငေါက်တောက်ဖြင့် ထထိုင်လာလေ၏။ ထို့နောက် လွန်စွာရှက်လွန်းလှသဖြင့် မျက်နှာကြီးတစ်ခုလုံး နီးမြန်းလာကာ ခန္ဓာကိုယ် တစ်ခုလုံးမှ ချွေးဒီးဒီးကျလာပြီး "သူကြီးမင်း.. ပြန်မယ်..ပြန်မယ်.. ကိုရင် ဒီမှာ ဆက်မနေချင်တော့ဘူး.. အခု ရွာပြန်ရအောင်.. အခု ရွာပြန်ရအောင်" ဟူ၍ စကားပလုံးပထွေးဖြင့် မနားတမ်း ပြောဆိုနေလေတော့၏။
"ဟာ... ကိုရင်ရယ်.. စဉ်းစားပါအုံး။ ကိုရင့်ရောဂါကလဲ အခုထက်ထိ ကောင်းသေးတာမဟုတ်ဘူး။ ပြီးတော့ အခု ညနေစောင်းနေပြီ။ ပြန်လို့ မဖြစ်ဖူးလေ။ နောက်နေ့မှ ဆရာဝန်နဲ့ ညှိနှိုင်းပြီး ပြန်ကြတာပေါ့" ဟု ပြောဆိုဖျောင်းဖြသော်လည်း ကိုရင်တက်ပုတစ်ယောက် ကုတင်ပေါ်မှ ဆင်းကာ ခပ်သွက်သွက် လမ်းလျှောက်ပြပြီး "ဒီမှာကြည့် သူကြီးမင်း အခု နေကောင်းသွားပြီ။ ဒါကြောင့် မိုးဘယ်လောက်ချုပ်ချုပ် အခု ပြန်မယ်၊ ပြန်ရအောင်ပါ သူကြီးမင်းရာ.. နော်..." ဟု အသနားခံသလိုလို ပြောလာသည့်အခါ သူကြီးမင်းလဲ ကိုရင်တက်ပုကို "သူ့ခမျာ အတော်လေး ရှက်သွားရှာမှာဘဲ" ဟု ကိုယ်ချင်းစာပြီး သနားစိတ်ဝင်သွားလေ၏။ ထို့ကြောင့် ဆရာဝန်ထံ သွားပြီး အကျိုးအကြောင်း ရှင်းပြကာ လိုအပ်သည့် ဆေးဝါးတစ်ချို့ ၀ယ်ယူပြီး အစာကျွေးထားသည့် နွားနှစ်ကောင်ကို ဆွဲယူကာ လှည်းကပြီး ရွာသို့ ညတွင်းချင်း ပြန်လာခဲ့ရလေတော့၏။
ညဆယ်နာရီခန့်လောက်တွင် တုံးဖလားရွာအနီးသို့ လှည်းဝင်ရိုးသံ တကျွီကျွီဖြင့် ချဉ်းကပ်လာမိလေ၏။ ထိုအခါ တုံးဖလားရွာသူရွာသားတို့မှာ ကိုရင်တက်ပုတို့ စီ;နင်းလာသည့် လှည်းသံကို အဝေးမှနေပြီး ကြားရခိုက် ကိုရင်တက်ပုတစ်ယောက် ဆေးရုံမှာ ဆုံးပါးခဲ့လို့ သူ့အလောင်းအား ရွာသို့ ညတွင်းချင်း လှည်းဖြင့် သယ်ဆောင်လာသည် အထင်ဖြင့် စိတ်မကောင်းခြင်း များစွာ ဖြစ်နေကြလေ၏။ သူ့မိဘ ဆွေမျိုး ညီအကို မောင်နှမတို့မှာလည်း ၀မ်းနည်းပက်လက်ဖြစ်ပြီး ရှုံ့မဲ့မဲ့ဖြင့် ငိုယိုဖို့ အသင့်ပြင်ထားကြလေ၏။ သို့သော် ကိုရင်တက်ပုတို့ နွားလှည်း ရွာထဲ ၀င်လာသည့် အခါ၌မူ ကိုရင်တက်ပုအား အရှင်လတ်လတ်ကြီး တွေ့လိုက်ရသောကြောင့် အံသြ၀မ်းသာ ဖြစ်ကြရလေတော့၏။
ရွာသူရွာသားများမှာ ညတွင်းချင်း ကျန်းမာရေးထူထူထောင်ထောင်ဖြစ်လာသည့် ကိုရင်တက်ပုကို ကြည့်ကာ မယုံကြည်နိုင်စွာဖြင့် ဘယ်လိုဆေးမျိုးများ ဒီလောက်အစွမ်းထက်ပါလိမ့်ဟု စဉ်းစားကာ သူကြီးမင်းအား ၀ိုင်းဝန်း စပ်စုကြလေတော့၏။ သူကြီးမင်းက အစမှ အဆုံးထိ အဖြစ်မှန်ကို ပြောပြလိုက်သည့်အခါ ရွာသူရွာသား အားလုံးတို့မှာ တိုင်ပင်မထားဘဲ တစ်ပြိုင်နက် ၀ါး ဟား ဟား ဟား ဟူ၍ ကျယ်လောင်စွာ ရယ်မောကြလေ၏။ ထိုရယ်မောသံကြောင့် ရွာတွင်းရှိ သရက်ကြီးများပေါ်၌ နားခိုနေကြသည့် ညဉ့်ငှက်တစ်ချို့ လန့်နိုးကာ အဝေးပျံသန်း သွားကြလေတော့၏။
ထိုနေ့မှစ၍ အံ့သြစွာ ကိုရင်တက်ပု ထူထူထောင်ထောင် ဖြစ်လာပြီး နေကောင်းကျန်းမာလာ၏။ သူ၏ အင်္ဂလိပ်စာက သူ့အား ပြန်ကယ်လိုက်ခြင်းဟု ဆိုလျှင် မှားအံ့မထင်ပေ။ သို့သော် ကိုရင်တက်ပုတစ်ယောက် စကားလဲ အတော်လေး နည်းသွားလေ၏။ ကြွားလုံးဖိန့်လုံးတွေကိုလဲ လုံးဝ မပြောတော့ပေ။ အင်္ဂလိပ်လို ညှပ်ပြောခြင်းကိုလဲ လုံးဝ မပြုတော့ပေ။ အင်္ဂလိပ်ဇာတ်ကားကို ဘာသာပြန်ဖို့ နေနေသာသာ ဗီဒီယို စကရင်နားသို့ပင် လုံးဝ မကပ်တော့ဘဲ ၀စီပိတ်ကျင့်ကြံနေသကဲ့သို့ အေးတိအေးစက်ဘ၀သို့ ပြောင်းလဲသွားလေ၏။ ထိုအဖြစ်အပျက်များ ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ပတ်ခန့် အကြာ၌ ကိုရင်တက်ပု တစ်ယောက် ရန်ကုန်သို့ ပြန်ဆင်းသွားလေတော့သတည်း။ အော်... ကိုရင် တက်ပု ကိုရင်တက်ပု၊ အခုလောက်ဆို ပဇင်းဖြစ်ပြီး ဓမ္မာစရိယတွေ ဘာတွေ ပြီးစီး အောင်မြင်နေရောပေါ့။ သတိရလိုက်ပါဘိ။ ။
ကိုရင်တက်ပု အဖြစ်အပျက်ကဲ့သို့ပင် အဖြစ်အပျက်တစ်ခု ကြားဖူးလေ၏။ မန္တလေးမြို့တွင် ဖြစ်၏။ ဦးဇင်းတစ်ပါး အင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့ကျင့်ရင်း အနောက်တိုင်းသူ အမျိုးသမီးတစ်ဦးနဲ့ ခင်မင်သွား၏။ ထို့နောက် အချင်းချင်း အသက်မေးကြလေ၏။ လမ်းအတူလျှောက်ရင်းဖြင့်ပင် ဦးဇင်းက နိုင်ငံခြားသူအား How old are you? ဟု မေးမြန်းသည့်အခါ I am 31 ဟု ပြန်ဖြေ၏။ ထို့နောက် ထိုနိုင်ငံခြားသူက And you? ဟု ဦးဇင်းအား ပြန်မေးသည့်အခါ ထိုဦးဇင်းမှာ သူကျက်မှတ်ထားသည့် Guess me please ဟု အသက်ကို မှန်းခိုင်းဖို့ ကြိုးစားရင်း အသံထွက် မှားသွား၍ ထိုနိုင်ငံခြားသူက အနားကပ်လာပြီး အားရပါးရဖက်ကာ ဘယ်ပါးညာပါးကို မွ မွ မွ ဟု ဘယ်ပြန်ညာပြန် မွှေးမွှေးပေးလေသောဟူ၏။ အမှတ်မထင် ထိုကဲ့သို့ ပြုလုပ်တာကို ခံလိုက်ရသည့် ဦးဇင်းမှာ ပူထူထူ ရှိန်းတိန်းတိန်းကြီးဖြစ်သွားကာ ရှက်ကိုးရှက်ကန်း ဖြစ်သွားသောဟူ၏။ ထိုဦးဇင်း အသံထွက်လိုက်သည်မှာ Kiss me please ဟူသတတ်။
သူများအကြောင်းကိုသာ ပြောရသည်။ ထိုကဲ့သို့ ဘာသာပြန်မှားခြင်းမျိုး ခပ်ဆင်ဆင် သူကြီးမင်း ကိုယ်တွေ့ ကြုံဖူးလေသည်။ သူကြီးမင်း ကြုံဖူးသော အဖြစ်အပျက်မှာ တုံးဖလားမှာလဲ မဟုတ် မန္တလေးမှာလဲ မဟုတ်ပေ။ စင်စစ်အမှန်မှာ ဤ ဘိလပ်ရွှေပြည်ကြီး၌ပင် ကြုံဖူးခြင်း ဖြစ်လေ၏။ သူကြီးမင်း တက်ရောက်နေသည့် တက္ကသိုလ်တစ်ခုတွင် ဖြစ်၏။ တစ်နေ့တွင် ဆရာမတစ်ယောက်က Globalization ကြောင့် ဆုံးရှုံးနိုင်သည့် ဆိုကျိုးများ ဟူသည့် ခေါင်းစဉ်ဖြင့် အက်ဆေးတစ်ပုဒ် အတန်းထဲ လက်တန်း ရေးခိုင်းလေ၏။ သူကြီးမင်းလဲ ပိုင်ပြီအထင်ဖြင့် Globalization ကြောင့် ရေခဲတောင်တွေပြိုခြင်း၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရေကြီးခြင်း၊ ဆားငန်ရည်လွှမ်းမိုး ခံရခြင်းကြောင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်နိုင်ခြင်း၊ သစ်ပင်များ သေဆုံးနိုင်ခြင်း၊ သက်ရှိသတ္တ၀ါများ သေဆုံးနိုင်ခြင်း၊ သယံဇာတများ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြင်း စသည့် ဆိုးကျိုးများကို တန်းစီပြီး ရေးချလေတော့၏။ နာရီဝက်အတွင်း အက်ဆေးတစ်ပုဒ် ပြီးသွားပြီး ဆရာမအား သွားပြသည့်အခါ ဆရာမသည် ပြုံးစိစိ ဖြစ်သွားပြီး အိုးးး မိုင်ဂေါ့ဒ်.. မစ်စတာ ကိုကိုမောင်၊ ငါမေးတာက Globalization၊ မင်းဖြေတာက Global-warming ဖြစ်နေပါရောလား ဟား ဟား ဟား ဟူ၍ ဆရာမ၏ ရယ်မောခြင်းကို ခံခဲ့ရဖူးလေ၏။
တော်ပါသေးရဲ့ ကိုရင်တက်ပုရဲ့ ဘာသာပြန်အမှားမျိုးလို မဟုတ်ခဲ့လို့။ တော်ပါသေးရဲ့ မန္တလေးက ဦးဇင်းတစ်ပါးရဲ့ အသံထွက် အမှားမျိုးလို မဖြစ်ခဲ့ပေလို့။ သို့ပေသည့် အမှားက အမှားပေဘဲ မဟုတ်ပါလား။ Minus+Minus=Plus ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ အမှား+အမှားက အမှန် မဖြစ်နိုင်ပေဘူးလေ။ နောင်လာနောက်သား အင်္ဂလိပ်စာ သင်ယူနေကြသည့် ညီငယ်နှမငယ်များလဲ ကိုရင်တက်ပုလို မန္တလေးက ဦးဇင်းလို သူကြီးမင်းလို အမှားမျိုး မကြုံရလေအောင် ကြိုးစားအားထုတ် မှတ်သားလေ့လာနိုင်ကြစေကုန်တော့သတည်း။ ။ ပြီးပြီ။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 00:41 21 comments:
တုံးဖလားသူကြီးမင်းတစ်ယောက် အောက်အကျေ ရန်ကုန်ရွှေမြို့တော်သို့ ဘုရားဖူးဆင်းလာခဲ့သည်။ ဘုရားစုံဖူးမျှော်ပြီးနောက် တုံးဖလားရွာသို့ ပြန်ရန် ရန်ကုန်မီးရထားဘူတာရုံကြီးဆီသို့ လာခဲ့လေ၏။ ဘူတာရုံအတွင်းရှိ ဂျာနယ်ရောင်းသည့်ဆိုင်၌ အားကစားဂျာနယ်တစ်စောင် ၀ယ်ပြီး ရန်ကုန် မန္တလေး အဆန် အမှတ် ၃ ရထားပေါ်သို့ တက်ရောက်ကာ မိမိ၏ ခုံနံပါတ်အတိုင်း အထက်တန်းတွဲပေါ်ရှိ ထိုင်ခုံ တစ်လုံးပေါ်၌ ထိုင်လျက် ထိုအားကစား ဂျာနယ်အား စိတ်ပါဝင်စားစွာ ဖတ်နေလေ၏။
ဟူသော အသံကို ကြားလိုက်ရသောကြောင့် အသံလာရာဆီသို့ ရုတ်တရက် လှမ်းကြည့်လိုက်ရာ နေကာမျက်မှန်ကားကားနဲ့ ဖော်မွန်လွယ်အိတ်ကြီးကို စလွယ်သိုင်းလွယ်ကာ ဘယ်ဘက်လက်ဖျံပေါ်၌ လက်ကိုင်ပ၀ါတစ်ခုကို စတိုင်လ်ကျကျ ချည်နှောင်ပြီး ရှိုးအပြည့်ထုတ်ထားသည့် ကိုရင်ကြီးတစ်ပါးကို ဗြုန်းစားကြီး တွေ့လိုက်ရလေတော့၏။
သူကြီးမင်းသည် ထိုကိုရင်ကြီးအား ထူးဆန်းစွာဖြင့် "ဘယ်က ကိုရင်ကြီးပါလိမ့်"ဟု အတွေးပွါးနေဆဲကာလ၌ ထိုကိုရင်ကြီးသည် သူကြီးမင်း သူ့အား မမှတ်မိသည်ကို သဘောပေါက်သွားပြီး သူတပ်ထားသည့် နေကာမျက်မှန်ကြီးအား ချွတ်လိုက်ပြီး သူကြီးမင်းကို ပြုံးပြကာ "ဟဲ..ဟဲ.. သူကြီးမင်း.. အခုတော့ မှတ်မိသွားပြီ မဟုတ်လား" ဟူ၍ မေးမြန်းလေတော့၏။ ထိုအခါကျမှ သူကြီးမင်းလဲ အံ့သြစွာဖြင့်..
"ဟာ... ဘယ်က ကိုရင်ကြီးများပါလိမ့်လို့ စဉ်းစားနေတာ။ လက်စသတ်တော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်လောက်က ဒို့တုံးဖလားရွာကနေ ရန်ကုန်ကို စာသင်ထွက်လာခဲ့တဲ့ ကိုရင်တက်ပုကြီး ဖြစ်နေတာကိုး။ ကိုရင်တက်ပုတစ်ယောက် လူပျိုကြီးလုံးလုံးဖြစ်နေပြီနော" ဟူ၍ ရထားတစ်တွဲလုံးပေါ်ရှိ လူတွေအားလုံး ကြားနိုင်လောက်သည့် အသံမျိုးဖြင့် အာမေဍိတ် ပြုလေတော့၏။
ရထားပေါ်ရှိ လူတွေရဲ့မျက်စိတွေအားလုံး ကိုရင်တက်ပုအပေါ်ကျရောက်လာပြီး ရယ်ကျဲကျဲ ဖြစ်နေကြလေ၏။ ကိုရင် တက်ပုလဲ ထိုခရီးသည်တို့အား ရှက်ရွံ့သလို ဖြစ်နေသောကြောင့် သူကြီးမင်းအား.. "ဟာ.. သူကြီးမင်းကလဲ..လုပ်ရော့မယ်။ ဖီးလ်ငုတ်လိုက်တာဗျာ... အဲဒီ နာမည်ကြီး မခေါ်စမ်းပါနဲ့။ ကိုရင့်ဘွဲ့ကိုသာ ခေါ်စမ်းပါ။ ဘယ့်နှယ်.. ရှက်စရာကြီး" ဟု ရှက်ရမ်းရမ်းပြီး ပြန်ပြောလေတော့၏။ "ဒါဖြင့် ကိုရင့်ဘွဲ့နာမည်ကော ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲဘုရား" ဟု မေးလိုက်သောအခါ.. "ကိုရင်တေဇလေ မသိဘူးလား"ဟူ၍ မျက်မှောင်ကြုတ်ကာ ပြန်ပြောလေ၏။
"ဒါနဲ့.. ကိုရင်က အခု ဘယ်လိုလုပ်ပြီး တပည့်တော်ဆီ တန်းရောက်လာရတာလဲ။ ဆိုင်းမဆင့် ဗုံမဆင့်နဲ့"
"သူကြီးမင်းက သိပ်နေနိုင်တာဘဲ။ ရန်ကုန်ရောက်တာတောင် ကိုရင့်ကို အကြောင်းမကြားဘူး။ အခုတောင် သူကြီးမင်း သွားတည်းခဲ့တဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းက ကိုရင်ညက်စိပြောပြလို့ သူကြီးမင်း စီးမဲ့ ရထားအမီ အသောနှင်ခဲ့ရတာ။ အထက်တန်းတွဲ ၁ ခုံနံပါတ် ၃ လို့ ကိုရင်ညက်စိပြောပြလို့ သူကြီးမင်းဆီ ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်ရောက်လာတာလေ"
"ထားပါတော့ ကိုရင်။ အခု ကိုရင့်ကို ကြည့်ရတာ လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်ကနဲ့ ဘာမှ မတူတော့ဘူး။ ကြည့်စမ်းပါဦး ကတုံးပြောင်ပြောင် သင်္ကန်းရဲတောက်တောက် နေကာမျက်မှန်ကားကား လွယ်အိတ်ကြီးတစ်ရမ်းရမ်းနဲ့။ ဒီကြားထဲ ဘယ်ဘက်လက်ဖျံမှာ ပ၀ါက စည်းထားလိုက်သေး။ အတော်လေး အကြည့်ရဆိုးလှတယ် ကိုရင်"
"ဟာ.. သူကြီးမင်းကလဲ ပိန်းနေပြန်ပါပြီ။ ဒါ Current stream လို့ ခေါ်တယ်ဗျ"
"ဘာလဲ Current stream ဆိုတာက"
"Current stream ဆိုတာ ခေတ်ရေစီးကြောင်းကို ပြောတာ သူကြီးရေ။ မသိရင်လဲ မှတ်ထားလိုက်ဦး"
"အံမယ်.. ငါ့ကိုရင်က အင်္ဂလိပ်တွေ ဘာတွေ တတ်လို့ပါလား"
"တတ်ဆို အခုတောင်မှ အင်္ဂလိပ်စာ သင်တန်းကနေ သင်တန်းဆင်းဆင်းချင်း သူကြီးမင်းဆီ အပြေးလာခဲ့ရတာ။ တော်သေးတယ် ရထားမထွက်ခင် အရောက်လာခဲ့နိုင်လို့။ နို့မို့ဆို သူကြီးမင်းကို တွေ့ရမှာ မဟုတ်ဘူး"
"ဒါနဲ့.. အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းက ဘယ်မှာ သွားတက်တာလဲ"
"U.M.A မှာ သွားတက်တာ သူကြီးမင်း။ ဒီပန်းဆိုးတန်း ဂုံးတံတားကျော်ပြီး ၁၅ မိနစ်လောက် လမ်းလျှောက်ရင် ရောက်ပြီ"
သူကြီးမင်းသည် ကိုရင်တက်ပုအား အတော်လေး အထင်ကြီးသွားမိလေ၏။ ရထားပေါ်ရှိ ခရီးသည်တို့သည်လည်း သူကြီးမင်းနှင့် ကိုရင်တက်ပုတို့၏ ဒိုင်ယာလော့ခ်ကို မျက်စောင်းထိုးထိုးပြီး မယောင်မလည် ကြည့်နေကြလေ၏။ သူကြီးမင်းသည်.. "U.M.A ဆိုတာ အတော်ကြီးကျယ်တဲ့ တက္ကသိုလ်တစ်ခုခု ဖြစ်ရမယ်။ ကိုရင် တက်ပု အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ ဒီလို တက္ကသိုလ်မျိုးမှာ အင်္ဂလိပ်စာ သင်နေတာဆိုတော့ အတော်လေးတော့ တိုးတက်မှာ သေချာတယ်..U.M.A ဆိုတော့(University of Myanmar Academy) များ ဖြစ်နေမလား မသိဘူး" ဟူ၍ စဉ်းစားခန်းဝင်နေပြီး စကားအဆက် ခဏပြတ်သွားလေ၏။
"သူကြီးမင်း.. ဘာတွေ စဉ်းစားနေတာလဲဗျ"
"ကိုရင် တက်နေတဲ့ U.M.A တက္ကသိုလ်အကြောင်း စဉ်းစားနေတာလေ"
"ဟာ.. သူကြီးမင်းကတော့ လုပ်ပြီ။ ဘယ့်နှယ် တက္ကသိုလ်ရမှာလဲ"
"ဒါဖြင့် U.M.A ဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲ ကိုရင်"
"သူကြီးမင်းကလဲ ကိုရင်က U Mya Aung ဆီမှာ သွားတက်နေတာပါ။ အဲဒါကြောင့် U.M.A ဆိုတာ U Mya Aung အင်္ဂလိပ်စာ သင်တန်းကို ပြောတာ သူကြီးမင်းရေ့"
"ဗုဒ္ဓေါ.. လက်စသတ်တော့ ဂလိုကိုးး"
ကိုရင်တက်ပု၏ U.M.A ရှင်းပြချက်ကို ကြားလိုက်ကြသော ခရီးသည်တို့မှာ ရေသောက်ရင်း ရေသီးသူက သီး၊ အသံထွက်ပြီး ရယ်သူက ရယ်နဲ့ ပွဲအတော်လေး ကျသွားကြလေ၏။ သူကြီးမင်း၏ စိတ်ထဲ၌လဲ... "ငါလဲ တုံးဖလားပြန်ရောက်ရင် K.K.M အင်္ဂလိပ်စာ သင်တန်းဆိုပြီး ဖွင့်ရင် ရတာဘဲ" ဟု သဘောရိုးလေးဖြင့်တွေးကာ မနောပြုံးလေး ပြုံးနေမိလေတော့၏။ ထိုအခိုက်...
"သူကြီးမင်းရေ... ရွာကFather နှင့် Motherကို ပြောလိုက်ပါဦး။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ Sonဖြစ်တဲ့ Noviceတဇတစ်ယောက် Rangoon Capitalကြီးမှာ English သင်တန်းတက်ပြီး အင်္ဂလိပ်စာတွေ Very Know နေပြီဆိုတဲ့ အကြောင်း။ ဘုန်းကြီးကို Monk မျောက်ကို Monkey ပိုက်ဆံကို Money ပျားရည်ကို Honey စတဲ့ မီးနင်းတွေလဲ ထုံးလိုကျေ ရေလို နှောက်နေပြီဆိုတဲ့ အကြောင်း One Two Three ရေတွက်တာလဲ Hundredအထိ ကောင်းကောင်း ရေတွက်တတ်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်း၊ စသဖြင့် စသဖြင့် အလုံးစုံ ပြောပြလိုက်ပါဦး သူကြီးမင်း"
"ဟုတ်ပါပြီ ကိုရင် ပြောလိုက်ပါ့မယ်"
"ကဲ ဒါဖြင့် အခု ကိုရင် Go တော့မယ်။ Teacher က Homework တွေ five pages လောက် give ခဲ့တယ်။ အဲဒါတွေ Study လုပ်ရဦးမယ်။ လှိမ့်ပြီ သူကြီးမင်းရေ.."
ဟူ၍ ပါးစပ်ကလဲပြော ရထားပြတင်းပေါက်မှလဲ လွှားကနဲ အောက်ခုန်ဆင်းကာ ရထားပေါ်ရှိ သူကြီးမင်းထံ ပြန်ကြည့်ပြီး ညာဘက်လက်ဖျားကို နဖူးပေါ်တင်ကာ အလေးပြုသည့်ပုံစံပြုလုပ်ပြီး သင်္ကန်းဖိုသီဖတ်သီ လွယ်အိတ်တဖွားဖွား မျက်မှန်တကားကားဖြင့် ရန်ကုန်ဘူတာရုံကြီးထဲမှ ထွက်ခွါသွားလေတော့၏။ သူကြီးမင်းလဲ... "အင်း.. ကိုရင်တက်ပုတစ်ယောက် ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ တုံးဖလားပြန်လာရင်တော့ အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ ဂုတ်ကျားတစ်ကောင် မျက်စိနှောက်ပြီး တ၀ုတ်ဝုတ် ဖြစ်နေမှာ မြင်ယောင်မိပါသေးရဲ့.." ဟု စဉ်းစားကာ အနားခဏချထားသည့် အားကစား စာစောင်အား ပြန်ကောက်ကိုင်ကာ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဒ် ချန်ပီယံဖလားကြီး ကိုင်မြှောက်ထားသည့် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်အား မြိန်ရှက်စွာ ဆက်ဖတ်နေလေတော့၏။ ထိုစဉ်ဝယ် မီးရထားကြီးသည်လည်း ရန်ကုန်ဘူတာရုံကြီးမှ ဘူးး ဘော် အသံပေးကာ စတင်ပြီး ထွက်ခွါလာလေတော့သတည်း။ ။ မပြီးသေးဘူးနော်။း)
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 02:35 23 comments:
ဂိဟိဘာဝ ဒုက္ခ (အားကျပြီး လူဝတ်လဲမိရာဝယ်...)
တစ် ခြောက်လုံး (၁၁.၁၁.၁၁) နေ့မှာ အမှတ်တရ ဖြစ်စေဖို့ ဤပို့စ်ကို ရေးသားပါသည်။ ။
သင်္ကန်းဝတ်နဲ့နေလာခဲ့သည်မှာ ကြာခဲ့ပြီ။ ကြာဆို ၁၀ နှစ်သား၌ ကိုရင်ဝတ်သည်။ အသက် ၂၀ ၌ ရဟန်းခံသည်။ အခု အသက် ၃၀ ရှိလေပြီ။ ကိုရင်သက် ၁၀ နှစ်၊ ရဟန်းသက် ၁၀ နှစ်၊ စုစုပေါင်း သင်္ကန်းသက် အနှစ် ၂၀ တိတိ ရှိလေပြီ။ ပရိယတ်စာပေကိုလဲ အထိုက်အလျောက် သင်ယူခဲ့သည်။ ၀ိနည်းသိက္ခာပုဒ်တော်များကိုလဲ ကြိုးစားပြီး ထိန်းသိမ်းလာခဲ့သည်။ ရဟန်းဘ၀ကား ကျေနပ်ဖွယ် ကောင်းလေစွ။ သူ၏ ဘွဲ့အမည်မှာ ဣန္ဒြိယ ဖြစ်၏။ ထို ဣန္ဒြိယဟူသည့် ဘွဲ့နာမည်ကို ရွာထဲမှ ကာလသားသမီးများက ရံဖန်ရံခါ "ဦးအိမ်သတိရ" ဟု စကြနောက်ကြတတ်သေး၏။
တစ်နေ့၌ ဦးဇင်းဣန္ဒြိယ မြို့တက်ပြီး ဓမ္မာစရိယစာမေးပွဲ သွားဖြေ၏။ ဘုန်းကြီးစာမေးပွဲတွေကို ဘယ်အချိန်ကစပြီး စာသင်ကျောင်းတွေမှာ ဖြေဆိုစေခဲ့သည်၊ ဘာအတွက် စာသင်ကျောင်းတွေမှာ ဖြေဆိုစေခဲ့သည်ကို မသိ။ ယနေ့တိုင်အောင် ဘုန်းကြီးစာမေးပွဲများကို အထက်တန်းကျောင်းများ၌ ဖြေဆိုစေမြဲ ဖြစ်လေသည်။ ဦးဇင်းဣန္ဒြိယသည် စာမေးပွဲဖြေရန် အထက်တန်းကျောင်းတစ်ခုသို့ ဘတ်စ်ကားဖြင့် အသွား ဘတ်စ်ကားပေါ်တိုးတက်စဉ် မတော်တစ်ဆ ၀ိသဘာဂအာရုံဖြစ်သည့် မာတုဂါမတစ်ယောက်နဲ့ အသားချင်း ထိခိုက်မိလေ၏။ တစ်ကိုယ်လုံး ကြက်သီးမွေးညှင်းထကာ ခေါင်းနပန်းကြီးသွား၏။ စိတ်တွေ လှုပ်ရှားသွား၏။ ဘတ်စ်ကားပေါ်က ဆင်းခဲ့ပြီးနောက် စိတ်တွေဂယက်ရိုက်နေသည်မို့ ပြင်ပအာရုံတစ်ခုနဲ့ အစားထိုးဖြေဖျောက်ရန် ပတ်ဝန်းကျင် ဟိုဟိုဒီဒီ လိုက်လံကြည့်နေမိ၏။
ဖြေဆေးရှာမှ အဆိပ်နဲ့ တန်းတိုးသလို အာရုံစုစည်းနိုင်ဖို့ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ အကူအညီကို ယူကာမှ ရောင်စုံအလှအပတို့ဖြင့် ရွှန်းလဲ့နေသည့် မိန်းခလေးတစ်သိုက်ဆီသို့ မျက်လုံး ရောက်သွားလေတော့၏။ ပိုဆိုးသွားလေပြီ။ သဘာဝတရားက ဖန်ဆင်းပေးထားသည့် ကောက်ကြောင်းတွေနောက် အာရုံတွေ ရောက်ရောက်သွားပြီး စိတ် အညစ်ညမ်းကြီး ညစ်ညမ်းမိလေတော့၏။ ကြောက်မက်စရာ အာရုံတွေပါတကား။ ပစ္စည်းဥစ္စာနှင့် မာတုဂါမ(အမျိုးသမီး)ဟာ ဘိက္ခု(ရဟန်း)ကို ရက်ရက်စက်စက် သတ်ပစ်နိုင်သည့် လက်နက်ကြီးများပင် ဖြစ်ပေတော့၏။
ပစ္စည်းမာတု၊ ဤနှစ်ခု၊ ဘိက္ခု သေမင်း၊ ဓါးနှစ်စင်း။
ပစ္စည်းမာတု၊ ဤနှစ်ခု၊ ဘိက္ခု သေကြောင်း၊ ဓါးနှစ်ချောင်း။
ဦးဇင်းဣန္ဒြိယတစ်ယောက် စာမေးပွဲလဲ ကောင်းကောင်း မဖြေဆိုနိုင်ခဲ့ပေ။ စိတ်ဓါတ်တွေလဲ အကျကြီးကျနေပြီး လောကီလူ့ဘောင်သို့သာ စိတ်ကူးယဉ်နေမိလေတော့၏။ မီးလောင်ရာ လေပင့်ဆိုသလို သူငယ်ချင်းရဟန်းလူထွက်ဖြစ်သူ တစ်ယောက်နဲ့ တိုင်ပင်ကြည့်ရာ ထိုရဟန်းလူထွက်က လူ့ဘောင်မှာဆို သားမယားနဲ့ ဇိမ်ကျကျနေနိုင်ပြီး ငါးပါးသီလလေး လုံခြုံကာမျှဖြင့် အပါယ်မကျနိုင်တော့ကြောင်း၊ ရဟန်းဘ၀မှာဆို ၀ိနည်းသိက္ခာပုဒ်တွေ အလွန်များကြောင်း၊ မစောင့်ထိန်းနိုင်ရင် အပါယ်သို့ ဇောက်ထိုးဆင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ငရဲပြည်မှာ ၀ိနည်းမလိုက်နာနိုင်လို့ ငရဲကျနေတဲ့ ရဟန်းတွေ အများကြီးရှိကြောင်း လေပေးကောင်းကောင်းဖြင့် လူ့ဘောင်သို့ ၀င်ရောက်ကူးပြောင်းရန် ဆွဲဆောင်လေတော့၏။
မချွေခင်က ကြွေချင်နေသူမို့ ဦးဇင်းဣန္ဒြိယလဲ ရဟန်းဘ၀မှ လူဝတ်လဲကာ ထိုသူငယ်ချင်း ရဟန်းလူထွက် အကူအညီဖြင့် ရွာထဲမှ ရွက်ကြမ်းရေကြို ရုပ်ရည်ရှိသည့် မိနှင်းဆိုသည့် အသက် ၂၀ ကျော်ကျော် မိန်းခလေးတစ်ယောက်နဲ့ အိမ်ထောင်ကျပြီး လူ့ဘ၀ကို စတင်လေ၏။ မိဘအကူအညီဖြင့် သီးသန့်အိမ်လေးတစ်လုံး ဆောက်ပြီး နေထိုင်ကြ၏။ အသက် ၃၀ ကျော်မှ ဘ၀ စသူမို့ အယောင်ယောင် အမှားမှား မကြာခဏဖြစ်၏။
ပြဿနာမှာ မင်္ဂလာဦးညကပင် စ၍ဖြစ်၏။ ကာလသားများ စားပွဲသောက်ပွဲပြီးလို့ ပြန်သွားကြတော့ ညဉ့်ပင် အတော်လေး နက်နေလေပြီ။ လူထွက် ဣန္ဒြိယသည် အိပ်ရာမ၀င်ခင် ဧည့်ခန်းရှိ ဘုရားစင် ရှေ့၌ ငုတ်တုတ်ထိုင်ကာ ဘုရားရှိခိုး၏။ ထို့နောက် တရားထိုင်နေပြန်၏။ ဇနီးပူပူနွေးနွေးလေး မိနှင်းခမျာ အိပ်ရာထဲကနေ လင်တော်မောင် ဘုရားရှိခိုး ပြီးနိုးနိုးဖြင့် စောင့်ရင်း အိပ်ပျော်သွားလေ၏။ လူထွက် ဣန္ဒြိယ အိပ်ရာထဲ ၀င်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ မိနှင်းတစ်ယောက် တခေါခေါဖြင့် တောင်တက်နေလေပြီ။
လူထွက် ဣန္ဒြိယသည် မနက်မိုးလင်းလင်းချင်း ဘုရားဝတ်တက်ပြန်၏။ ထို့နောက် ဘုရားစင်ရှေ့ မိန့်မိန့်ကြီး တင်ပလ္လင်ခွေထိုင်ပြီး မိန်းမ အိပ်ရာအနိုးကို စောင့်ကာ "မိန်းမရေ... မနက်စာ ပြင်ဆင်ပြီးရင် လာကပ်တော့နော်၊ ငါ ဘုဉ်းပေးချင်နေပြီ" ဟူ၍ ပြောလေတော့၏။ ဟုတ်တော့လဲ ဟုတ်ပေသားဘဲ။ ဒီအချိန်ဟာ ရဟန်းဘ၀ကဆို အရုဏ်ဆွမ်း အချိန်မဟုတ်လား။ အကျင့်များ တယ်လဲ ဖျောက်ရ ခက်ပေသကိုး။ အင်းပေါ့လေ။ နှစ် ၂၀ လုံးလုံး သင်္ကန်းဝတ်နဲ့ နေလာခဲ့တာဆိုတော့လဲ အကျင့်ဝါသနာ ဗီဇက ပယ်ဖျောက်ရ အခက်သား။ အကျင့်ဗီဇဆိုတာကလဲ ဘုရားရှင်မှသာ ပယ်သတ်နိုင်တာ မဟုတ်ပါလား။
ဒီလိုနဲ့ ညဘက် ဘုရားဝတ်တက်၊ တရားထိုင်၊ ပုတီးစိပ်၊ မေတ္တာပို့၊ အမျှဝေ လုပ်လိုက်၊ အိပ်ရာထဲဝင်တော့ မိန်းမ တစ်ခေါခေါ အိပ်ပျော်နေတာ တွေ့လိုက်နဲ့ အိမ်ထောင်ပြုပြီးတာသာ တစ်ပတ်ကျော်သွားတယ်၊ ရဟန်းလူထွက်တို့ စုံတွဲ လင်မယား အရာ မမြောက်ကြသေးဘဲ ရှိလေသည်။ ရဟန်းလူထွက်ကလဲ ခပ်ရှက်ရှက်၊ မိနှင်းကလဲ မိန်းခလေးမို့ ခပ်ရှက်ရှက်။ ဆိုတော့။ ဘယ်လိုက ဘယ်လို အစပျိုးရမှန်းမသိ ဖြစ်နေကြလေသည်။
တစ်နေ့မှာတော့ အကြံဖြင့် ရဟန်းလူထွက်တစ်ယောက် ညနေခင်း ခပ်စောစောကထဲက ဘုရားဝတ်တက်ခြင်း လုပ်ငန်းတို့ကို ကြိုတင်ပြုလုပ်လေ၏။ အမျိုးသမီးကလဲ မောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း)ရဲ့ သောကခြေရာ ကဗျာများကို ဖယောင်းတိုင် မီးဖြင့် ဧည့်ခန်းထဲ၌ပင် ထိုင်ဖတ်နေ၏။ အမျှဝေ ကြေးစည်ထုပြီး ဘုရားကိစ္စ အဆုံးသတ်လိုက်၏။ သို့သော် ဘုရားကိစ္စပြီးတော့ မယားကိစ္စ ဘယ်လို ဆက်ရမည် မသိ ဖြစ်နေပြန်၏။ ဒီလိုနဲ့ လူထွက်တစ်ယောက် "ငါက ယောက်ျားဘဲလေ၊ အရာအားလုံးမှာ ငါက ဦးဆောင်သင့်ပါတယ်" ဟု စဉ်းစားကာ အရဲစွန့်ပြီး "မိန်းမရေ... ကာမဂုဏ်လေးများ အလိုရှိရင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောနော်။ အားမနာနဲ့" ဟူ၍ မိန်းမအနား ကပ်ကာ မတိုးမကျယ် ဒဲ့ဒိုးကြီး ပြောချလိုက်လေတော့၏။ မိန်းမ ဖြစ်သူ မိနှင်းကလဲ ခေသူမဟုတ်။ "သေနာကြီး အခုမှ လာပြောရသလား၊ တကထဲမှဘဲ။ ရဟန်းအကျင့်ကို မပျောက်တတ်သေးဘူး... လာ.... " ဆိုပြီး လက်ဆွဲကာ အိပ်ခန်းထဲ ၀င်ရောက်သွားလေတော့မှ အရာမြောက်ကြလေတော့၏။ လက်ချိုးရေတွက်ကြည့်လိုက်တော့ မင်္ဂလာဦးညမှသည် ယခု အကြင်လင်မယား မြောက်တဲ့ နေ့အထိ ဆယ်ရက် တိတိ။
မနက်မိုးလင်းတော့ ရဟန်းလူထွက် မျက်နှာမှာ ပြုံးဖြီးဖြီးကြီး ဖြစ်နေလေ၏။ ကျေနပ်သည့် အပြုံးပင် ဖြစ်၏။ ရွာထဲမှ တင်ဖေကြီး စောစောစီးစီး ရဟန်းလူထွက်အိမ်ပေါက်ချလာပြီး "ဘယ်လိုလဲ ကိုရင်ကြီးရ အစစ အရာရာ အဆင်ပြေပြေ ရှိမှ ရှိပါလေစ" ဟူ၍ ရဟန်းလူထွက်အား မေးမြန်းလေ၏။ ရဟန်းလူထွက်ကလဲ "ကျုပ် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ လူမထွက်ခဲ့ရတာ နာလှသဗျာ၊ နောင်တ ရလို့ကို မဆုံးဘူး" ဟု ဘွင်းဘွင်းကြီး ပြန်ဖြေလေ၏။ တင်ဖေကြီးကလဲ ရပ်မနေဘဲ "ဘာဖြစ်လို့လဲဗျ" ဟု ထပ်တွန့်ကာ မေးလေ၏။ ရဟန်းလူထွက်လဲ မိန်းမမိနှင်းကို တစ်လှည့် တင်ဖေကြီးကို တစ်လှည့်ကြည့်ကာ ရှက်ပြုံးဖြင့် "အဟီးဟီး" ဟု လူကြီးရှက်တော့ ရယ်လိုက်လေတော့၏။ ထိုအခိုက် ရဟန်းလူထွက်အား မိနှင်းရဲ့ မျက်စောင်းထိုးပုံမှာ မျက်လုံးများပင် ကျွတ်ထွက်လာပြီး ထိမှန်လာတော့ မယောင်ယောင်။
ဒီလိုနဲ့ မိုးဦးကျရာသီ ရောက်လာလေ၏။ မိဘများက လုပ်စားဖို့ လယ်ကွက်တစ်ခု ပေးထား၏။ သို့သော် မိနှင်းလဲ မိဘလုပ်စာ စားပြီး ကြီးပြင်းလာသူမို့ ဘာအလုပ်မှ မလုပ်တတ်၊ လူထွက်လဲ ဘာအလုပ်မှ မလုပ်ဖူးသောကြောင့် ဘယ်ကစပြီး ဘယ်လို လုပ်ရမှန်းမသိ။ တစ်နေ့သော် ရဟန်းလူထွက်တစ်ယောက် တတ်သလောက် မှတ်သလောက် စမ်းသပ်ကာ လယ်ကွက်ကို ထယ်ထိုးလေ၏။ မိန်းမဖြစ်သူ မိနှင်းကလဲ ကန်သင်းပေါ်၌ ထိုင်နေပြီး လင်တော်မောင် ထယ်ထိုးသည်ကို ကြည့်နေလေ၏။ လယ်ကွက်အတွင်း တစ်ပတ်(one round) နှစ်ပတ်(two rounds) ထယ်ထိုးပြီးသော အခါ ထယ်ထုဖြင့် အရာဝတ္ထုတစ်ခုအား ထိုမိပြီး ထိုအရာဝတ္ထုသည် အပေါ်သို့ ငေါကနဲ ပေါ်လာလေ၏။ "ဟာ.. ထယ်သွားကြီး၊ ဘယ်တုန်းက ဘယ်သူ ကျန်ထားခဲ့လဲ မသိဘူး။ ငါနဲ့ ထိုက်လို့ ငါ ရတာ" ဟူ၍ စဉ်းစားကာ လယ်ကန်သင်းရှိ မိန်းမအား "မိန်းမရေ... ထယ်သွားကြီး တစ်ခု ထယ်ထိုးရင်း တွေ့တယ်။ အဆင်ပြေတာဘဲ၊ ငါတို့ ကံရှိလို့ ရတာ နေမှာ" ဟု အော်ပြောလေ၏။
"ဘယ်မှာလဲ ပြစမ်းပါဦး" ဟု မေးလဲမေး အနားသို့လဲ လာရောက်ကာ ယောက်ျားဖြစ်သူထံမှ အသစ်ရသည် ဆိုသော ထယ်သွားကြီးကို ကြည့်ရှုပြီးနောက်.....
"ရှင် ဒီလောက် အ ရ တုံးရသလား။ ဒါ ဘယ်သူ့ ထယ်သွားမှ မဟုတ်ဘူး။ ကျုပ်တို့ ထယ်သွားကြီး။ ရှင် ထယ်ထိုးရင်း ပထမအပတ်က ပြုတ်ကျထားခဲ့တာ။ အခု နောက်တစ်ပတ်(another round) ဒီနေရာရောက်မှ ရှင် ပြန်တွေ့တာ" ဟူ၍ အော်ငေါက် ပြောဆို လေတော့သည်။ ဟုတ်ပေသားဘဲ။ လယ်ကွက်ကို ထယ်ရေးညက်အောင် တစ်ပတ်ပြီးတစ်ပတ် ခပ်စိပ်စိပ် ထယ်ထိုးရသည် မဟုတ်ပါလား။ ပထမအပတ်က ပြုတ်ကျ ကျန်ထားခဲ့သည့် ထယ်သွားကို အခုတစ်ပတ် ဒီနေရာရောက်တော့ ထယ်ထုဖြင့် ပြန်ထိုးမိခြင်း ဖြစ်လေ၏။
လင်နှင့်မယား လျာနှင့်သွား ဆိုရိုးစကားအတိုင်း လင်မယားနှစ်ယောက် အချင်းချင်း စကားများ ရန်ဖြစ်ကြပြီး စကားအချေအတင် သူနိုင် ကိုယ်နိုင် ပြောနေကြလေ၏။ မိနှင်းက "ကျွန်မ မိဘအရိပ်အောက်မှာ နေစဉ်က အခုလို ဒုက္ခမရောက်ဖူး။ ခြေမွေးမီးမလောင် လက်မွေး မီးမလောင်နေလာခဲ့ရတာ။ ရှင်နဲ့ အိမ်ထောင်ကျပြီးမှဘဲ ဒုက္ခပေါင်းစုံနဲ့ ကြုံတွေ့ရတာ။ ရှင်နဲ့ ရတာ ကျွန်မကံဆိုးတယ်" ဟူ၍ လင်တော်မောင်အား နှက်လိုက်လေ၏။ ယောက်ျားဖြစ်သူကလဲ အားကျမခံ "ငါလဲ နင်နဲ့ အိမ်ထောင်ကျမှ အခုလို ဒုက္ခဆိုးတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရတာ။ ငါ ရွာဦးကျောင်းမှာတုန်းကဆို ဘာမှ လုပ်စရာ မလိုဘူး။ ဘုရားရှိခိုးလိုက်၊ စာလေးကျက်လိုက်၊ တရားလေးထိုင်လိုက်နဲ့ အဆင်ကို ပြေလို့။ အခု နင်နဲ့ ရမှ ငါ့ဘ၀မှာ မကြုံဖူးတဲ့ ဒုက္ခတွေနဲ့ ကြုံတွေ့နေရတာ" ဟူ၍ ပြန်ပက်လိုက်လေတော့၏။
ဤသို့ဤနှယ် ဖိုက်လိုက် ကိုက်လိုက် မိုက်လိုက် ရိုက်လိုက် ပြန်ခေါ်လိုက် ပြန်ဆော်လိုက် ပြန်ချစ်လိုက် ပြန်ကစ်လိုက် အက်ကြောင်းပျိုးလိုက် မျက်စောင်းထိုးလိုက် ပြန်အော်လိုက် ပြန်ဆော်လိုက် ပြန်မုန်းလိုက် ပြန်ပြုံးလိုက် ဘုရားဝတ်ပြုလိုက် မယားဝတ်ပြုလိုက်ဖြင့် ရှစ်လခန့်မျှ ကြာသောအခါ မိနှင်းရဲ့ ခပ်ချပ်ချပ်ဗိုက်ကလေး တစ်ထွာလောက် အပေါ်သို့ ဖောင်းတက်လာသောဟူ၏။ ။ ပြီးပြီ။ ။
အသက်ကြီးမှ လူ့ဘောင်ကနေ ရဟန်းဘောင်သို့ ကူးပြောင်းလာသူသည်လည်းကောင်း
အသက်ကြီးမှ ရဟန်းဘောင်ကနေ လူ့ဘောင်သို့ ကူးပြောင်းလာသူသည်လည်းကောင်း
လွန်စွာမှ ကိုးလို့ကန့်လန့် နိုင်လှပေ၏။ ။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 02:14 27 comments:
ဒုလ္လဘ ဒုက္ခ (အားကျပြီး ရဟန်းဝတ်မိရာဝယ်...)
ဦးပဇင်းတောက်ထိန်ကို မြင်ကထဲက သောင်းဟန်တစ်ယောက် ပဇင်းဝတ်ချင်စိတ်ပေါက်နေမိသည်။ ဦးပဇင်း တောက်ထိန်သည် ခေါင်းတုံးပြောင်ပြောင် အသားဖြူဖြူ သင်္ကန်းညိုညိုနဲ့ အတော်လေး ကြည်ညိုဖွယ်ကောင်းနေလေသည်။ တောက်ထိန်ပဇင်းတက်ခဲ့သည်မှာ တစ်နှစ်နီးနီးပင် ရှိလေပြီ။ "လူ့ဘောင်လောကမှာ စိတ်ညစ် စိတ်ရှုပ်စရာတွေချည်း" ဟု အကြောင်းပြပြီး ပဇင်းတက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တေဇသာမိဟု ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်က ဘွဲ့နာမည်ပေးထားသော်လဲ လူနာမည်ဖြစ်သည့် တောက်ထိန်ဟုပင် နာမည်တွင်လျှက် ရှိနေလေသည်။
ဦးပဇင်းတောက်ထိန်ကို အားကျပြီး သောင်းဟန်တစ်ယောက် စိတ်ထိန်းချုပ်မရလောက်အောင် ပဇင်းဝတ်ချင်စိတ် ပေါက်နေလေတော့သည်။ ထို့ကြောင့် သီတင်းကျွတ်ကာလလေးမှာ မိဘနှစ်ပါးကို စပါးရိတ်အမီ လူဝတ်ပြန်လဲခဲ့မည်ဟု ကတိပေးပြီး ပဇင်းတက်ဖို့ ရွာဦးကျောင်း ဆရာတော်ဆီ လာခဲ့လေသည်။ စိတ်အတွင်းမှလဲ ဆရာတော်တော့ ရဟန်းသစ် တစ်ပါး တိုးမှာမို့ ၀မ်းသာနေမှာဘဲ ဟု စဉ်းစားကာ ကြည်နူးသလိုလို ဖြစ်မိနေလေသည်။
"ဆရာတော်... တပည့်တော် ပဇင်းတက်ချင်လို့ပါဘုရား"
"မင်း...မင်း... နောက်တစ်ခါ ထပ်မပြောနဲ့တော့၊ ငါ ထွေးခံနဲ့ ပေါက်လိုက်ရ။ သွား... အခု ငါ့ရှေ့က ထွက်သွားစမ်း"
"တပည့်တော် ဘာများ မှားသွားလို့လဲ ဘုရား"
"မင်း.. ထပ်မပြောနဲ့တော့လို့ ပြောထားတယ်နော်။ ငါ စိတ်တိုလာရင် မင်းမလွယ်ဘူး။ ပဇင်းတက်ချင်ရင် ငါ့ကျောင်းကို ဘယ်တော့မှ မလာခဲ့နဲ့၊ တစ်ခြား ကျောင်းကိုသာသွား..."
အထင်နဲ့အမြင် လွှဲစင်နေသည်ကို တွေ့ရ၍ သောင်းဟန်တစ်ယောက် ဆရာတော် ဘာဖြစ်လို့ စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်မှန်း သဘောမပေါက် ဖြစ်နေလေသည်။ သို့သော် ထပ်မပြောနဲ့တော့ဟု စကားလမ်းကြောင်း ပိတ်ထားသောကြောင့် ဘာစကားမှ မပြောရဲတော့ဘဲ ရွာဦးကျောင်းမှ အမြန် ပြန်လာခဲ့ရလေသည်။
ထို့နောက် အကြံကောင်း ရလိုရငြား ဆရာတော်နဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ရှိသည့် ရွာထဲမှ ဦးဘမှုံထံသို့ ခြေဦးတည်ခဲ့လေသည်။ ဦးဘမှုံကြီးအား အခန့်သား သူ့အိမ်ပေါ်မှာ တွေ့လိုက်ရသည့်အတွက် ၀မ်းသာသွားသည်။ အမှန်ဆို ဦးဘမှုံတစ်ယောက် ရွာရိုးလျှောက်ပြီး အလွတ်ကျက်မှတ်ထားသည့် အစိန္တေယျဘုရား ရှိခိုးစာတွေကို ရွတ်ဆိုနေကြဖြစ်သည်။
"ကျနော် ပဇင်းဝတ်ချင်လို့ ညနေက ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ဆီ သွားခွင့်ပန်တာ အငေါက်ခံထိပြီး ပြန်လာခဲ့ရတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ ဆရာတော် အဲဒီလောက် စိတ်ဆိုးမှန်း မသိဘူး"
"မင်းက ဆရာတော်ကို ဘယ်လို လျှောက်လိုက်လို့လဲ"
"ရိုးရိုးလေးပါဘဲ။ တပည့်တော် ပဇင်းတက်ချင်လို့ပါဘုရားလို့ လျှောက်လိုက်တယ်လေ"
"မင်း.. အဲဒါ ခက်တာပေါ့။ ရွာဦးကျောင်း ဆရာတော်အကြောင်း မသိတာလဲ မဟုတ်ဘဲနဲ့"
"ဆိုင်ပါပကော မောင်သောင်းဟန်ရယ်။ မင်းက ပဇင်းတက်ချင်တယ်လို့ သွားလျှောက်တာကိုးကွ။ မင်း မှတ်ထား။ ဆရာတော်ကို နောက် ဘယ်တော့မှ ပဇင်းတက်ချင်တာတို့ ရဟန်းတက်ချင်တာတို့ ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းနဲ့ သွားမလျှောက်နဲ့။ မင်းကို ဘယ်နည်းနဲ့မှ လက်ခံစဉ်းစားပေးမှာ မဟုတ်ဘူး"
"ဒါဖြင့် ဘယ်လို လျှောက်ရမှာလဲ ဘကြီးမှုံ"
"လွယ်လွယ်လေးပါ။ ဆရာတော်က အမျိုးသားရေးဝါဒသမားဆိုတော့ ပဇင်းတက်ချင်တာတို့ ရဟန်းတက်ချင်တာတို့ အစား ပဇင်းခံချင်တယ် ရဟန်းခံချင်တယ်ဆိုပြီး ပြင်လျှောက်လိုက်ရုံပေ့ါ။ ဒါဆို ဆရာတော် သေချာပေါက် မင်းကို လက်ခံလိမ့်မယ်"
ကြုံဖူးပေါင် ဂုဏ်ထူးဆောင်ပါဘဲ။ သို့ပေသည့် မတတ်နိုင်ပြီ။ သူ့အရပ် သူ့ဇာတ်ပေဘဲ။း) ဘကြီးမှုံ ပေးခဲ့တဲ့ အကြံအတိုင်း နောက်တစ်နေ့မှာ သောင်းဟန်တစ်ယောက် ရွာဦးကျောင်းသို့ ခြေဦးလှည့်ပြီး ဆရာတော်ထံ ခွင့်ပန်ပြန်လေသည်။
"ဆရာတော်.. တပည့်တော် ရဟန်းခံချင်လို့ပါဘုရား"
ဘကြီးမှုံပေးခဲ့တဲ့ အကြံ တိုက်ရိုက်ထိလေသည်။ ဆရာတော်က..
"အေး အေး... ရဟန်းခံချင်ရင်တော့ မင်းကို လက်ခံမယ်။ မင်းကို ရဟန်းတက်ပေးမယ်။ ရဟန်းတက်ချင်ရင် ပဇင်းတက်ချင်ရင်တော့ တစ်ခြားကျောင်းကိုသွား။ ဟုတ်ပြီလား"
ဟူ၍ အမျိုးသားရေးဝါဒသမားပီပီ ရှောရှောရှူရှူ လက်ခံလိုက်လေတော့သည်။ ထူးထွေတည့်.. အံ့ရာသော်ဝ်ပါဘဲ။ အသုံးအနှုံးလေး ကွဲပြားရုံနဲ့ လက်ခံခြင်း လက်မခံခြင်းတို့ ကွဲပြားခြားနားတတ်သည်ကိုးး။ ဒီလိုနဲ့ သောင်းဟန်တစ်ယောက် သီတင်းကျွတ်ကာလမှာ ရဟန်းဘောင်သို့ ရောက်ရှိခဲ့လေသည်။ ရဟန်းဘွဲ့အမည်မှာ ဦးသုတစာဂ ဟူ၍ ဖြစ်၏။ သို့သော် ဦးပဇင်းသောင်းဟန်ဟုပင် အားလုံးက ခေါ်ကြလေသည်။
ရဟန်းဝတ်ပြီး အကြီးမားဆုံး ပြဿနာမှာ ညနေပိုင်း၌ ဗိုက်ဆာခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ အရာအားလုံးကို ခံနိုင်ရည်ရှိပေမဲ့ ဗိုက်ဆာခြင်းကို ဘယ်လိုမှ သည်းခံ၍ မရ။ ပထမတစ်နေ့၌ အောင့်အီးပြီး ရေသောက်ကာ ဗိုက်တဂွီဂွီနဲ့ ကြိတ်မှိတ်ကာ နေခဲ့ရသော်လဲ နောက်တစ်နေ့၌မူ နေ့ဆွမ်းစားပြီးချင်း ထမင်းအဖြူကို ၀ှက်ယူကာ ချန်ထားလိုက်လေသည်။ သို့သော် ညနေပိုင်းသို့ ရောက်သောအခါ စားဖို့ နေရာက အရေးကြီးပြန်လေသည်။ ဆရာတော်နဲ့လဲ မမိအောင် ကိုရင်ကျောင်းသားတွေနဲ့လဲ မတိုးမိအောင် ဘယ်လို စားရမှန်းမသိ။ တစ်ယောက်ယောက် တွေ့မြင်သွားရင် ဆရာတော်ဆီ သံတော်ဦးတင်လိုက်မှဖြင့် မဟာဒုက္ခ။ ဤသို့ဖြင့် ညဦးပိုင်းသို့ ရောက်လာလေသည်။
ဗိုက်ကလဲ အရမ်းဆာလာပြီမို့ ဆားဖြူးထားသည့် ထမင်းဖြူထုပ်ကလေးကို စောင်ခြုံထဲယူပြီး ခေါင်းမြီးခြုံအိပ်ကာ အိပ်ရင်းနဲ့ ဖြေစားလိုက်ရလေသည်။ ဟောခန်းထဲ စုပေါင်း အိပ်ရသည်မို့ သတိ အတော်လေး ထားပြီး စားနေရသည်။ ကိုယ့်ထမင်း ကိုယ် ခိုးစားရတဲ့ ဘ၀၊ တယ်လဲ သနားစရာ ကောင်းလိုက်ပါဘိ။ တစ်လုပ်နှစ်လုပ် စားပြီးသောအခါ တစ်စုံတစ်ယောက် လမ်းလျှောက်ပြီး သူ့ဆီ ဦးတည်လာနေသည့် ခြေသံကို ကြားလိုက်ရလေသည်။ ဆရာတော်များ ရောင်း(Round) လာလှည့်လေသလားမသိ။
ခြေသံကို နားထောင်ကြည့်လိုက်တော့ သူ့ခြေရင်းမှာ လူးလာခေါက်တုံ့ လမ်းလျှောက်နေခြင်း ဖြစ်သည်ကို သိလိုက်ရပြီးနောက် စောင်ခြုံထဲက ထမင်းကိုလဲ ဆက်ပြီး မစားရဲ၊ ခေါင်းမြီးခြုံလဲ မဖွင့်ကြည့်ရဲဘဲ ခြေသံအတိတ်ကိုသာ သည်းခံပြီး စောင့်မျှော်နေရလေတော့သည်။ သို့သော် ခြေသံက ဆက်လက် ရှိနေမြဲပင်။ ဦးဇင်းသုတစာဂတစ်ယောက် ခြေသံပိုင်ရှင် ထွက်အသွားကို စောင့်ရင်း ဗိုက်ထဲလဲ အစာ နှစ်လုပ်လောက် ၀င်ပြီး ဖြစ်လို့ မျက်လုံးလေး စင်းကာစင်းကာဖြင့် အိပ်ပျော်သွားလိုက်လေတော့သည်။
ညဉ့်နက်သန်းခေါင်ကျော်ကျော်လောက်မှာ ခြေထောက်ကို တစ်စုံတစ်ယောက်က ကန်ပြီးနိုးလိုက်သည့်အတွက် ဖြတ်ကနဲ နိုးလာလေသည်။ လာနိုးသည့်သူကို ကြည့်လိုက်တော့ ဖယောင်းတိုင်မီး ကိုင်ဆောင်ထားသည့် ဆရာတော်ကိုယ်တိုင် ဖြစ်နေသည်ကို အိပ်ချင်မူးတူး မှုန်ဝါးဝါး အမြင်ဖြင့် မြင်လိုက်ရလေသည်။ ပိုပြီး သဲသဲကွဲကွဲ မြင်ရရန် မျက်စိပွတ်ကြည့်ဖို့ လက်ဝါးကို မျက်နှာပေါ်တင်လိုက်တော့ စေးကပ်ကပ် အရာတွေ မျက်နှာတစ်လျှောက် ကပ်နေသည်ကို စမ်းမိလေသည်။ ဘာတွေပါလိမ့်။
အနားမှာ ရပ်ကြည့်နေတဲ့ ဆရာတော်က သူ့မျက်နှာရှေ့ မှန်တစ်ချပ် လာထောင်ပေးလေသည်။ မှန်ထဲ သေချာမျက်လုံး ပြူးပြဲကြည့်လိုက်တော့ ထမင်းစေ့တွေ။ဘုရား ဘုရား။ ညတုန်းက ထမင်းခိုးစားရင်း စောင်ခြုံထဲ အိပ်ပျော်သွားသည်ကို အခုမှ အမှတ်ရမိလိုက်သည်။ အိပ်ပျော်နေခိုက် အအိပ်ဆော့သည့်အတွက် မျက်နှာနဲ့ ထမင်းထုပ်နဲ့ အပ်မိပြီး မျက်နှာပြင်တစ်လျှောက်လုံး ထမင်းစေ့တွေ ကပ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ အိပ်မောကျနေခိုက် ဘယ်လူးညာလူးဖြင့် စောင်က မျက်နှာပေါ်က ကွာကျသွားခြင်းဖြစ်မည်။ ဆရာတော်က ညဘက်ညခင်းတွေမှာ ကိုရင်ကျောင်းသားတွေကို အခုလို ကြည့်ရှုနေကြဖြစ်သည်။ သီတင်းကျွတ်ကာလမို့ အအေးဓါတ် အတော်ကလေး ၀င်ရောက်လာပြီ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကိုရင်ပေါက်စ ကျောင်းသားပေါက်စလေးတွေ အိပ်ပျော်ရင်း စောင်လွတ်ပြီး အအေးပတ်မှာ စိုး၍ အခုလို ညဘက် ရောင်းလှည့် စစ်ဆေးခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ စစ်ဆေးရင်း ဦးဇင်းသုတစာဂ ဖြစ်ပုံကို မြင်တွေ့သွားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓေါ။ ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေ။ "ဆရာတော် ခွင့်လွတ်ပါဘုရား၊ ဗိုက်အရမ်းဆာလို့ ခိုးစားမိပါတယ်" ဟု ကပျာကယာ တောင်းပန်လိုက်ရလေတော့သည်။
နောက်တစ်နေ့ မိုးလင်းတော့ ဦးပဇင်းသုတစာဂကို ဒဏ်ပေးလေသည်။ ထင်းခွဲခိုင်းခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ထင်းတုံးပေါင်း အတုံး နှစ်ဆယ်ခန့်ရှိသည်။ ထင်းခွဲနေသည့် နေရာအနီး၌ ဆရာတော်က ခုံလွတ်တစ်လုံး ယူပြီး ထိုင်ကြည့်နေလေသည်။ ထင်းတုံးတစ်တုံး၌ မြက်ဆုံကြီးကို တွေ့ရာ...
"ဆရာတော်... ဒီတုံးမှာ မြက်ဆုံကြီးရှိတယ်။ ပေါက်ဆိန်နာလိမ့်မယ် ထင်တယ်။ ဒါကြောင့် ထင်းတစ်တုံးနဲ့ အစာထိုးပြီး ပေးပါဘုရား"
ဟု လျှောက်ထား အသိပေးလိုက်လေရာ ဆရာတော်က သူ၏ လက်သုံးစကား အတိုင်း...
"ခိုင်းတာလုပ်၊ ခံမပြောနဲ့၊ ခုံနဲ့ ရိုက်လိုက်လို့၊ ခါးကျိုးသွားမယ်"
ဟူ၍ အသံခပ်မာမာဖြင့် ပြန်ဟောက်လေတော့သည်။ ဦးဇင်းသုတစာဂလဲ ဘာမှ ဆက်မပြောတော့ဘဲ ပေါက်ဆိန်ကျိုးကျိုး ထင်းတုံးကွဲကွဲ အားကုန်ခဲ၍ ထင်းခွဲခြင်းလုပ်ငန်းကို ချွေးဒီးဒီးကျသည်ထိ လုပ်ကိုင်လိုက်ရလေတော့သည်။ ထမင်းတစ်လုပ် ဒုတ်တစ်ချက်ဆိုတာ ဒါကို ခေါ်တာဘဲ ဖြစ်ရမယ်။း)
နောက်တစ်နေ့ရောက်တော့ ထမင်း ခိုးမစားရဲတော့ပေ။ သို့သော် "ကြိုက်မရှက်၊ ငိုက်မရှက်၊ ငတ်မရှက်" ဟူ၍ ဆိုရိုးစကား ရှိသည် မဟုတ်ပါလား။ ငတ်ပြီဆိုမှဖြင့် ဘာကိုမှ ထည့်မတွက်တတ်တော့။ ညပိုင်းရောက်တော့ ထုံးစံအတိုင်း ဦးဇင်းသုတစာဂ ဗိုက်ဆာရောဂါက ဆန္ဒပြလာပြန်သည်။ နေ့လည်တုန်းက ထမင်းလဲ ၀ှက်မယူထားခဲ့လေတော့ အကြံရခက်နေလေသည်။ သို့သော် မီးဖိုဆောင်နဘေးမှာ ဆယ်ဝင်စဉ့်အိုးကြီးဖြင့် တည်ထားသည့် မုန့်ညှင်းချဉ်အိုးကြီး ရှိနေသည်ကို ဦးပဇင်းသုတစာဂ သိရှိပြီးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လူခြေတိတ်ချိန်တွင် အမှောင်ကို အားပြုကာ ထိုမုန့်ညှင်းချဉ်အိုးကြီးဆီသို့ တိုးတိုးတိတ်တိတ် သွားပြီး အဖုံးကို အသာကလေးဖွင့်ကာ အချဉ်ပေါက်နေပြီ ဖြစ်သည့် မုန့်ညှင်းချဉ်ဖတ်တို့ကို တစ်ဆုပ်ယူကာ အားရပါးရ စားသောက်လေတော့သည်။
ထိုအခိုက် လက်နှိပ်ဓါတ်မီးရောင် တစ်ခု မျက်နှာပေါ်တည့်တည့် ကျရောက်လာလေသည်။ အထိတ်တလန့်ဖြစ်ကာ ပါးစပ်ထဲ ရောက်ပြီးသား မုန့်ညှင်းချဉ်ဖတ်တို့ကို ထွေးပစ်ရနိုးနိုး မျိုချရနိုးနိုးဖြင့် ခိုးထုပ်ခိုးထည်တို့နှင့်အတူ လက်ဆုပ်လက်ကိုင် အမိခံလိုက်ရလေတော့သည်။ "ငါ့နှယ်နော်။ တစ်ခါခိုး တစ်ခါမိ ဆိုတာ ဒါကို ခေါ်တာဘဲ ဖြစ်ရမယ်" ဟု စိတ်ထဲ ရေရွတ်ရင်း ဟန်ဆောင်ကာ မာန်ပါပါဖြင့် သူခိုးက လူလို ဟစ်ကာ "ဘယ်သူလဲ" ဟု အော်မေးမိလိုက်ရာ "ဘယ်သူရမှာလဲ မင့်အဖေ ငါ" ဟု ပြန်ပြောခဲ့သည့် ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်၏ အသံကို တုန်လှုပ်ချောက်ခြားစွာ ကြားလိုက်ရလေတော့သည်။း(
"ပဇင်းသစ် သုတစာဂ။ ကုသိုလ်လိုချင်လို့ သင်္ကန်းဝတ်လာတာဆိုရင်ဖြင့် ၀ိနည်းစည်းကမ်းကို လိုက်နာပါ။ အသက်လဲ ငယ်တော့တာ မဟုတ်ဘူး။ ၀ိနည်း မထိန်းသိမ်းနိုင်ရင်လဲ လူဝတ်လဲလို့ ရပါတယ်။ ခိုးစားတာဟာ ပစ္စည်းခိုးယူတာနဲ့ အတူတူပါဘဲ။ အပြစ်ကြီးလှပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရှေးဆရာတော်တွေက အခုလို လင်္ကာလေးတွေ စီထားခဲ့ကြတယ်။ အပြစ်မကျူးလွန်မိအောင်ပေါ့။
ဘာသာတိုင်းက၊ တားမြစ်ကြ၊ ဆိုးလှ ခိုးဝှက်ခြင်း။
ယခုဘ၀၊ ပြစ်ဒဏ်ကျ၊ သေက အပါယ်ဆင်း။
အခု ကိစ္စမှာတော့ ငါ သိပ်ခွင့်လွတ်လို့ မဖြစ်ဖူး။ မောင်ပဇင်းကို လက်မှတ်ထိုးခိုင်းရမယ်။ ဒါမျိုး နောက်တစ်ခေါက် ထပ်ကျူးလွန်ရင် ကျောင်းတိုက်က နှင်ထုတ်ပစ်ရမယ်။ ဒါကြောင့် ဒီမှာ လက်မှတ်ထိုးပါ"
ကျောင်းတိုက် စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သူကို သမိုင်းချီပြီး မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် ထို မှတ်တမ်းစာအုပ်အတွင်း ဦးပဇင်းသုတစာဂသည် နောက်တစ်ကြိမ် ယခုကဲ့သို့ မကျူးလွန်တော့ကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ရလေသည်။ ဘောလုံးစကားနဲ့ ပြောရလျှင်ဖြင့် ဦးဇင်းသုတစာဂ အ၀ါကပ် ထိသွားခြင်းပင် ဖြစ်လေတော့၏။ ထို့နောက် ကိုရင် ကျောင်းသား အများရှေ့၌ ဆရာတော် တိုင်ပေးသော အောက်ပါ လင်္ကာလေးအား သုံးခါတိတိ ခပ်ကျယ်ကျယ် လိုက်ဆိုခဲ့ရလေတော့၏။
"(မုန့်ညှင်းချဉ်အိုး၊ စားဖို့ခိုး၊ ဒါမျိုးမလုပ်တော့ပါဘုရား) ၃"
ရဟန်းဘ၀ဖြင့် ကျင့်သားရနေပြီဖြစ်သည့် ဦးဇင်းတောက်ထိန်ကို အားကျပြီး ရဟန်းဝတ်လာမိသည့် သောင်းဟန်တစ်ယောက် ရဟန်းဘ၀ တကယ်မလွယ်မှန်း ညနေစာမစားရခြင်းလေးဖြင့်ပင် သဘောပေါက်သွားလေ၏။ "ရဟန်းဘ၀ အလွယ်မမှတ်နဲ့...တကယ် ကြပ်သကွဲ့ ဒကာတို့ရေ...အနယ်နယ် အရပ်ရပ် ငါတို့ပြည်မှာ....." ဆိုတဲ့ တေးထပ်ကလေးကို အခုလို အခက်အခဲမျိုးအတွက် ရေးသားခဲ့ကြဟန် တူပါရဲ့။
ဦးပဇင်းတွေ ကိုရင်ကျောင်းသားတွေအားလုံးကို ဆရာတော်က စာကျက်ခိုင်းထားလေ၏။ ဦးပဇင်းသုတစာဂလဲ ကိုရင်ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူ ၀ိုင်းဖွဲ့ပြီး စာကျက်စာအံအမှု ပြုရလေသည်။ သို့သော် စာကျက်ခြင်းထက် ၀တ္ထု မဂ္ဂဇင်းဖတ်ခြင်းကိုသာ စိတ်အားထက်သန်သည့် ဦးပဇင်းသုတစာဂသည် စာအံရင်း ဆရာငြိမ်းကျော်၏ "အတိတ်လွင်ပြင်ကို ဖြတ်သန်းသွားသော အကြင်နာမျက်နှာစိမ်းများ" အမည်ရှိ ၀တ္ထုစာအုပ်အား ဘုရားစာအုပ် အကာအကွယ်ဖြင့် ဖတ်နေလေ၏။ ထိုအခိုက် ကိုရင်တစ်ပါးက ဦးပဇင်း သုတစာဂအား "ဆရာတော်နဲ့ မိရင် မလွယ်ဘူးနော်" ဟု သတိပေးလေသည်။ သို့သော် ဦးဇင်းသုတစာဂက သူ၏ သီအိုရီအား ကိုရင်ကျောင်းသားတွေကို အခုလို ပြောပြလေသည်။
"ဘုရားစာဖတ်ခြင်းဖြင့် ဗဟုသုတ မစုံနိုင်၊ ၀တ္ထု မဂ္ဂဇင်းဖတ်ခြင်းဖြင့်သာ ဗဟုသုတ စုံနိုင်တယ်"
ထိုကဲ့သို့ ကိုရင် ကျောင်းသားများအား ပြောပြလိုက်ရာ ကိုရင်ကျောင်းသားတွေအားလုံးလဲ တိုင်ပင်ထားသည့်အလား ညီညီညာညာဖြင့် ဆရာတော်၏ လက်သုံးစကားဖြစ်သည့်...
ဟု ခပ်ကျယ်ကျယ် ရွတ်ဆိုပြီး ရယ်မောနေကြလေသည်။ ထိုစဉ် မျက်နှာချင်းဆိုင်မှ ကိုရင်တစ်ပါး ဦးပဇင်းသုတစာဂ၏ ခေါင်းပေါ်သို့ ကျော်ကြည့်ကာ ရုတ်တရက် တထိတ်တလန့် မျက်စိမျက်ဆံပြူး အမူအယာ ဖြစ်သွားသည်ကို မြင်တွေ့လိုက်ရလေ၏။ ဦးပဇင်းသုတစာဂလဲ ရောယောင်ကာ နောက်သို့ သမင်လည်ပြန် လှည့်၍ ကြည့်လိုက်တော့ ဒေါသအပြုံးဖြင့် နီနီရဲရဲ ပြုံးဖြဲဖြဲကြီးဖြစ်နေသည့် ဆရာတော့် မျက်နှာကြီး။
သဗ္ဗေသတ္တာ အဝေရာ ဟောန္တု
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 22:06 18 comments: